Myanmar Daily Mail: October 2011
Fwd: ဒုတိယသမ္မတ သီဟသူရဦးတင်အောင်မြင့်ဦးနှင့် တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် ၀မ်ကျားပေါင်တို့ မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စများ ဆွေးနွေး၊ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သော ကွဲလွဲချက်များက နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကို မထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း တရုတ်မီဒီယာများဖော်ပြ ၊
ဒုတိယသမ္မတ သီဟသူရဦးတင်အောင်မြင့်ဦးနှင့် တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် ၀မ်ကျားပေါင်တို့ မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စများ ဆွေးနွေး၊ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သော ကွဲလွဲချက်များက နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကို မထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း တရုတ်မီဒီယာများဖော်ပြ ၊
တရုတ်သင်္ဘောသားများကို သတ်သူ ထိုင်းစစ်သားများဖြစ် ၊
ရေနံလုပ်ကွက် စူးစမ်းမှု ဥရောပ ပါဝင်လာ ၊
ရခိုင်၌ တက္ကသိုလ်တစ်ခု ထပ်မံတည်ဆောက်ရန်ရှိ ၊
နှစ် ၁၀၀ ကျော်သက်တမ်းရှိ ဝန်ကြီးများရုံး ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသို့ လွှဲအပ် ၊
သွားလာရခက်ခဲသည့် ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များပြေးဆွဲရန် မြန်မာ့လေကြောင်းစီစဉ် ၊
တစ်ပတ်ရစ် မော်တော်ယာဉ် အရောင်းစင်တာ ဖွင့်တော့မည် ၊
ကားဟောင်းလဲကာ ကားသစ်တင်သွင်းရန် ပါမစ်ရရှိထားသူများအား အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်နေ့မှစ၍ အင်ဂျင်ပါဝါ ၁၃၀၀ စီစီအောက်ကားများဆိုပါက မော်ဒယ်ကန့်သတ်မထားဘဲ ကားသစ်များအထိ တင်သွင်းခွင့်ပြုမည် ၊
အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများတွင် High-way Police များထားရှိနိုင်ရန် စီစဉ် ၊
ရန်ကုန်မြစ်ကို ဖြတ်၍ ရန်ကုန်- ဒလဆက်သွယ်သည့် ကောင်းကင်တံတား တစ်ခု(သို့မဟုတ်) ရေအောက်ဥမင် လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရန် ကိုရီးယားကုမ္ပဏီတစ်ခု လာရောက်ဆွေးနွေး ၊
သီလဝါရေနက်ဆိပ်ကမ်းအနီး မြန်မာ-ကိုရီးယား ပူးပေါင်း၍ စီးပွားရေးမြို့တော် တည်မည် ၊
နိုင်ငံတကာမှပညာရှင်များ မြန်မာ့သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ စာတမ်းဖတ်ပွဲသို့ လာရောက်ဖတ်ကြားမည် ၊
Money Changer Counter စုစုပေါင်း (၅၀) ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြု ၊
BBC withdrew controversal Burmese map from their website ၊
အာဒမ်ရယ် ဧဝရယ် ဒဿရယ်နှင့် အင်းသီးဇာတ်ကားများ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် နိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်း၌ သွားရောက်ပြသမည်
ဒုတိယသမ္မတ သီဟသူရဦးတင်အောင်မြင့်ဦးနှင့် တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် ၀မ်ကျားပေါင်တို့ မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စများ ဆွေးနွေး၊ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သော ကွဲလွဲချက်များက နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကို မထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း တရုတ်မီဒီယာများဖော်ပြ
မြန်မာဒုတိယသမ္မတ သီဟသူရဦးတင်အောင်မြင့်ဦးနှင့် တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် ၀မ်ကျားပေါင်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတ သီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦးနှင့် တရုတ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ၀မ်ကျားပေါင်တို့သည် အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် နန်နင်းမြို့၌ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး နှစ်နိုင်ငံဘက်စုံ မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စများ ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရသည်။
ဒုတိယသမ္မတ သီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦးသည် အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၆ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့သော တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲနှင့် တရုတ်-အာဆီယံ စီးပွားရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ထိပ်သီး အစည်းအဝေး သို့ တက် ရောက်ရန် ကွမ်ရှီးကျွမ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ နန်နင်းမြို့သို့ လာရောက်စဉ် တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ရေအားလျှပ်စစ်၊ သတ္တု၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးကဏ္ဍများတွင် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ အရှိန်အဟုန် မြှင့်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည့်နည်းတူ နယ်စပ်နှင့်ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်ရေး၊ တရုတ်နှင့် အာဆီယံအရေးတွင် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စတို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် နှစ်နိုင်ငံ ဘုံအကျိုးစီးပွားများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် သင့်လျှော်သောအဖြေတစ်ခုရရှိရန် တရုတ်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ဒုတိယသမ္မတက ပြောကြားခဲ့ကြောင်း တရုတ်မီဒီယာများက ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ ပြောကြားချက်ကိုးကား၍ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သော ကွဲလွဲမှုများကြောင့် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်မည်မဟုတ်ကြောင်း China Daily သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့သည်။
''နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ သဘောတူညီချက်အရ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စီမံကိန်းတွေအသက်ဝင်စေဖို့၊ ကတိက၀တ်တွေဖြည့်ဆည်းဖို့၊ တရုတ်-မြန်မာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဖွံ့ဖြိုးအားကောင်းစေရေး အာမခံချက်ပေးဖို့ နှစ်နိုင်ငံ စလုံးက စိတ်အားထက်သန်စွာ ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်''ဟု ၀မ်ကျားပေါင်က ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခုဆွေးနွေးပွဲသည် မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းထားပြီးနောက်ပိုင်း နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ပြန်လည်ကောင်းစေရန် နှစ်ဖက်ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်း ထားကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်သည် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်အနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ အောက်တိုဘာလ အစောပိုင်းက တွေ့ဆုံထားခဲ့ပါသည်။ ယင်းသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် တရုတ်ဒုတိယသမ္မတ ရှီကျင်ပင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ယန်ကျိချီတို့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလျံကျော် အကုန်ကျခံ တည်ဆောက်မည့် မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းထားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ညှိ နှိုင်းဆောင်ရွက်သွားရန် တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများက သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီး တရုတ်နိုင်ငံပိုင် ဆင်ဟွာသတင်းဌာနက အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် သတင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်နေ့က ၀မ်ကျားပေါင်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သော ဒုတိယသမ္မတသီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦးသည် အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၆ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ခဲ့သော တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲနှင့် တရုတ်-အာဆီယံ စီးပွားရေး နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကုန်စည်ပြပွဲနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ထိပ်သီး အစည်းအဝေးပွဲသို့ ဒုတိယသမ္မတဦးတင်အောင်မြင့်ဦး၊ အစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများအပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှစိုက်ပျိုးရေး၊ ငါးလုပ်ငန်း၊ စက်မှု၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊ ကျောက်မျက်၊ ရိုးရာလက်မှုပစ္စည်း၊ သစ်တော၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသီးသီးမှ လုပ်ငန်းရှင် ၂၀၀ ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ပြခန်းပေါင်း ၈၀ ခန့် ပါဝင်ပြသခဲ့ကြပါသည်။
ခန့်မှန်းဖော်ပြခဲ့ကြသည့်စာရင်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် ယခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅ ဒသမ ၅ ဘီလျံ ရှိလာခဲ့ပြီး အဆိုပါ ပမာဏမှာ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းက ရှိခဲ့သော ၁၂ ဒသမ ၃ ဘီလျံမှ တိုးတက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုမှာ ၄ ဒသမ ၄ ဘီလျံ ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ပထမသုံးလတာ ကာလအတွင်း ၁ ဒသမ ၆ ဘီလျံရှိကြောင်း သိရသည်။
Ref: China Daily, Xinhua
တရုတ်သင်္ဘောသားများကို သတ်သူ ထိုင်းစစ်သားများဖြစ်
ထိုင်းစစ်တပ်က ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားသည့် ချင်ရိုင်ခရိုင် ချင်းစန် မြို့နယ် မဲခေါင်မြစ်အတွင်းမှ တရုတ်နိုင်ငံ အလံတပ်ဆင်ထားသော သင်္ဘော ၂ စီး (ဓာတ်ပုံ - ဘန်ကောက်ပို့စ်)
တလောက ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် မဲခေါင်မြစ်မှာ ကုန်တင်သင်္ဘော ၂ စင်းပေါ်က တရုတ်သင်္ဘောသား ၁၃ ယောက်ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထိုင်း စစ်သား ၉ ယောက်က သူတို့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံပြီး ရဲထံ အဖမ်းခံတယ်လို့ ဒီနေ့မှာ ထိုင်းရဲဌာနက ပြောကြောင်း Reuters သတင်းတပုဒ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
သင်္ဘောနှစ်စင်းပေါ်မှာ တရုတ်သင်္ဘောသားများဟာ အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်နေ့က မြန်မာ-ထိုင်း-လာအို နယ်စပ်ဆုံရာ မူးယစ်ဆေးဝါးကုန်ကူးမှုနဲ့ နာမည်ကျော်တဲ့ ရွှေတြိဂံနယ်မြေအတွင်း တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ချင်းဆန် ဒိစတြိတ် ရဲအကြီးအကဲက အမှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းစစ်သားကိုးယောက်အနက် နှစ်ယောက်ဟာ အရာရှိအဆင့်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိ်ုပါတယ်။
"သူတို့အကုန်လုံး စစ်တပ်ကချည်းပဲ။ သူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တာကို ရဲစခန်းကိုလာပြီး ဝန်ခံတယ်" လို့ ရဲအကြီးအကဲ Phopkorn Kooncharoensuk က ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသေးစိတ် ဖြေဆိုဖို့တော့ ငြင်းဆန်သွားပြီး စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ရဦးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရေနံလုပ်ကွက် စူးစမ်းမှု ဥရောပ ပါဝင်လာ
ပြည်တွင်းရေနံ လုပ်ကွက်တွေကို ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်စေဖို့ ကမ်းလှမ်းထားတဲ့အပေါ် လာရောက်စူးစမ်းလေ့လာတဲ့ ပြည်ပကုမ္ပဏီ ၄၀ ကျော်မှာ ဥရောပကုမ္ပဏီအချို့လည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရတယ်။ မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်း၊ ဘူမိဗေဒ အရာထမ်းတစ်ဦးက "အခုကတော့ ဥရောပကုမ္ပဏီ တချို့ပါလာပြီး စုံစမ်းကြတယ်၊ အင်္ဂလန်ကလဲ ပါတယ်ပြောတယ်၊ နေပြည်တော်မှာ ဆွေးနွေးကြတာဆိုတော့ ဘယ်ကုမ္ပဏီဆိုတာတော့ အတိအကျ မသိရသေးပါဘူး" လို့ ပြောပါတယ်။ ပြည်တွင်းက လစ်လပ်နေတဲ့ ကုန်းတွင်းရေနံလုပ်ကွက်တွေကို လုပ်ကိုင်ဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကတင် ပြည်ပကုမ္ပဏီ ၄၀ ကျော် လာရောက်စူးစမ်းတာလို့ ဆိုပါတယ်။ လစ်လပ်ရေနံလုပ်ကွက်တွေက မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းမှာ အဓိကရှိပြီး ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဘက်မှာလည်း ပါဝင်တယ်။ အခုလို မြန်မာ့ကုန်းတွင်းရေနံ လုပ်ကွက်တွေကို ပြည်ပကုမ္ပဏီတွေ လုပ်ကိုင်စေဖို့ ကမ်းလှမ်းပေမယ့် သတ်မှတ်ချက်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို လုပ်ကွက်သုံးခုထက် ပိုမယူရပါဘူး။ ပြည်တွင်း ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်တွေ အနေနဲ့ ရေနံလုပ်ကွက်မှာ လုပ်ကိုင်ချင်တယ် ဆိုရင်လည်း ပြည်ပကုမ္ပဏီတစ်ခုခုနဲ့ ပူးတွဲလုပ်ကိုင်ရမှာပါ။ လက်ရှိ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ပြည်ပရေနံကုမ္ပဏီက မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်းနဲ့ အကျိုးအမြတ် ခွဲဝေခံစားရေး သဘောတူစာချုပ်အရ လုပ်ကိုင်နေကြတာပါ။ လက်ရှိ ပြည်တွင်းက ကုန်းတွင်းပိုင်းရော ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်တွေမှာပါ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ပြည်ပရေနံကုမ္ပဏီ ၁၄ ခုလောက်ရှိကြောင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ထုတ် မော်ဒန် သတင်းဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ရခိုင်၌ တက္ကသိုလ်တစ်ခု ထပ်မံတည်ဆောက်ရန်ရှိ
﻿ရခိုင်ပြည်နယ်၌ တက္ကသိုလ် တစ်ခုထပ်မံတည်ဆောက်သွား ရန် အစီအစဉ်များ ရှိနေသည်ဟု တောင်ကုတ်၊ မအီ၊ ဂွနှင့် သံတွဲ မြို့တို့၏ အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြင့်လှိုင်က ပြောသည်။ "တက္ကသိုလ် တည် ဆောက်သွားဖို့ နီးစပ်နေတဲ့ သဘောမှာ ရှိနေပါတယ်။ ရခိုင် တောင်ပိုင်းက ကျောင်းသားတွေ အတွက် ပိုအဆင်ပြေသွားတာ ပေါ့" ဟု ၄င်းက ပြောသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တက္ကသိုလ် ဝင်တန်း အောင် ကျောင်းသားများ အနေဖြင့် ဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံဘာသာရပ်များ ﻿သင်ကြားကြ ရန်အတွက် ယခင်က တက္ကသိုလ် တစ်ခုတည်းကိုသာ အားကိုးနေရ ပြီး ယခုထပ်မံတည် ဆောက်ပေးနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် တက္က သိုလ်နှင့် ဆိုပါက နှစ်ခုရှိ သွား မည်ဖြစ်ရာ အိုးမကွာ၊ အိမ်မကွာ ပညာသင်ကြားသွားနိုင်မည့် အခြေ အနေရှိသွားမည်ဟု ဒေသခံအချို့ ထံမှ သိရသည်။ လက်ရှိ လျာထားနေရာမှာ တောင်ကုတ်မြို့တွင်ဖြစ်ပြီး လိုအပ် သည့် မြေဧက အချို့ကိုပေးလှူမည် ဟု ကမ်းလှမ်းထားသည့်ကုမ္ပဏီ တစ်ခုကိုလည်း ရရှိထားပြီးကြောင်း၊ စီမံကိန်းကာလကို အတိအကျ မိမိ မသိရှိရသေးသော်လည်း မကြာမီ စတင်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ကို မိမိ ပြော ﻿နိုင်ကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးမြင့်လှိုင်က ထပ် မံဆိုသည်။
စစ်တွေမြို့ရှိ လက်ရှိ တက္က သိုလ်ကို မြောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်ဟု ခေါ်ဆိုနေကြသည့်အတွက် ပေါ် ထွန်းလာဖွယ်ရှိသည့် တောင်ကုတ် မြို့ရှိ တက္ကသိုလ်ကို တောင်ပိုင်း တက္ကသိုလ်ဟုခေါ်ဆိုသွားနိုင်ဖွယ် ရှိသည်ဟုပါ ဒေသခံအချို့က ပြောသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဒေသများဖြစ်သည့် ကျောက်ဖြူ၊ သံတွဲ၊ ရမ်းဗြဲ၊ မာန်အောင်၊ အမ်း၊ တောင်ကုတ်နှင့် ဂွမြို့နယ်ရှိ ကျောင်းသားများသည် စစ်တွေ တက္ကသိုလ်သို့ သွားရောက် ပညာ ﻿သင်ယူရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေး အခက်အခဲများရှိနေသည့် အတွက် တောင်ကုတ်မြို့တွင် တက္ကသိုလ် ဖွင့်လှစ်နိုင်မည်ဆို ပါက ကျောင်းတက်နိုင်မည့် ကျောင်းသားဦးရေပိုများလာမည် ဖြစ်ရာ တည်ထောင်ရန် စဉ်းစား ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စဖြစ်ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြ အေးက လွှတ်တော်တွင်း၌ဆို သည်။ လက်ရှိ၌ စစ်တွေတက္က သိုလ်တွင် ပညာသင်ကြားနေ သူ ၁၄၉၂၁ ရှိကြောင်း စာရင်းများ အရ သိရသည်။
နှစ် ၁၀၀ ကျော်သက်တမ်းရှိ ဝန်ကြီးများရုံး ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသို့ လွှဲအပ်
နှစ် ၁၀၀ ကျော်သက်တမ်းရှိ ဝန်ကြီးများရုံးအား နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသို့ အပြီးအပိုင် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဘုတ်အဖွဲ့မှ သိရသည်။ "ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း လွှဲပြောင်း ပေးလိုက်တာပါ။ ဆိုလိုတာက ဟိုတယ်မလုပ်တော့ဘူးပေါ့" ဟု မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဘုတ်အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်တွင် ပြောသည်။ ယင်းအဆောက်အအုံကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ ကိုယ်တိုင် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုသို့ ပေးအပ်မှုကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ယင်းဝန်ကြီးများရုံးကို အလေးထားသည်မှာ ပေါ်လွင်နေကြောင်း၊ သမိုင်းအစဉ်အလာအရ ပြယုဂ်အနေဖြင့်သာ ထားရှိသင့်သည်ကို လက်ခံသည့်သဘော ရှိနေကြောင်းကို ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်၊ ဗိသုကာပညာရှင်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အချို့တို့မှ သဘောထား မှတ်ချက်ပြုသည်။ ရန်ကုန်မြို့၌ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသင့်သည့် ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံ ၁၈၉ လုံးရှိသည့်အနက် ထိုဝန်ကြီးများရုံးမှာ အဆောက်အအုံ ကြီးမားခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့် သမိုင်းအစဉ်အလာ ကြီးမားခြင်းတို့ ရှိသည့်အတွက် ထိပ်ဆုံး၌ ရပ်တည်နေသည်ဟု ပြောဆို၍ ရကြောင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အတွင်းပိုင်းက ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး လေ့လာစဉ်အခါကလည်း မူလယဉ်ကျေးမှု လက်ရာများအတိုင်း ရှိနေသည်ကို အထင်အရှား တွေ့ရှိခဲ့ရသည့် မှတ်တမ်းများလည်း ရှိခဲ့ကြောင်း ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွင် ပါဆောင်ရွက်ခဲ့ သူလည်းဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ ဗိသုကာပညာရှင်များအသင်း၏ နာယက ဦးသန်းတင်အောင်က ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နေ့ထုတ် Popular News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
သွားလာရခက်ခဲသည့် ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များပြေးဆွဲရန် မြန်မာ့လေကြောင်းစီစဉ်
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံခြားလေယာဉ်ကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်းကာ သွားလာရခက်ခဲသည့် ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များပြေးဆွဲနိုင်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရှိရပါသည်။
သွားလာရခက်ခဲပြီး လေယာဉ်အသေးစားများသာ ဆင်းသက်နိုင်သည့် လေယာဉ်ကွင်းတိုသာရှိသော ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များကို မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်းမှ ပြေးဆွဲခဲ့သည်။ ကျောက်တု၊ ပလက်ဝ၊ ပေါက်၊ ဖား ပွန်၊ ဘားအံ၊ ပုလော၊ ပုလဲကျွန်း၊ မိုင်း တုံ၊ မိုင်းဆတ်၊ တာလေ၊ မိုင်းယောင်း၊ လုံးခင်း၊ တနိုင်း၊ နောင် မွန်း၊ နမ္မတူ၊ မိုးမိတ် စသော ခရီးစဉ်များကိုတွင် အော်တာအမျိုးအစား လေယာဉ်များဖြင့် ပျံသန်းပြေးဆွဲခဲ့ပြီး ၁၉၈၆ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် အဆိုပါခရီးစဉ်ပြေးဆွဲမှုများ ရပ်နားသွားခဲ့သည်။
''၁၉၈၆ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီး လေယာဉ်ကွင်းတိုသွားခရီးစဉ် တွေရပ်နားခဲ့ပါတယ်။ ခရီးစဉ်တွေလည်း မပြေးဆွဲတော့ လေယာဉ်ကွင်းတွေလည်း ထိန်းသိမ်းပြုပြင်မှု မရှိတော့ဘူးပေါ့'' ဟု မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
လာမည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်မူ သွားလာရခက်ခဲပြီး လေယာဉ်ကွင်းတိုသာရှိသော ခရီးစဉ်များကို ပြန်လည်ပြေးဆွဲနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး ဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။''ခရီးစဉ်တွေကို နိုင်ငံခြား ရဟတ်ယာဉ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ပူးပေါင်းပြီး ပြေးဆွဲနိုင်ဖို့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်''ဟု မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်းမှ တာဝန်ရှိသူက ဆိုသည်။
တစ်ပတ်ရစ် မော်တော်ယာဉ် အရောင်းစင်တာ ဖွင့်တော့မည်
Friday, 28 October 2011 14:43
﻿တစ်ပတ်ရစ်မော်တော် ယာဉ် အရောင်းစင်တာများကို ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော်နှင့် မန္တလေးတို့၌ စမ်းသပ်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ကို ပြုလုပ်ပေးတော့ မည်ဖြစ်ကြောင်း မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီမှ အကြီးတန်းအရာရှိတစ် ဦးက ပြောသည်။ "ပြောတဲ့ နေရာ ၃ ခုကိုပဲ လက်ရှိမှာလောလောဆယ်စမ်းသပ် ကာလအနေနဲ့ ဖွင့်ခွင့်ပေးသွားမှာပါ။
ကျန်တဲ့နေရာတွေ မပါသေးပါဘူး တင်သွင်းခွင့်ပေးတဲ့ ကားအစီးရေကို လည်း ၁၀ဝ ထက်ကျော်ပြီးပေးမှာ မဟုတ်ဘူး"ဟု တစ်ကြိမ်လျှင် အစီး ရေ ၅၀ မှ ၁၀ဝ အထိ ကိုသာတင် သွင်းရောင်းခွင့်ပြုသည့် ၄င်းစင်တာ များနှင့်ပတ်သက်၍၄င်းကပြောသည်။ လက်ရှိအချိန်အထိ အဆိုပါ အရောင်းဌာနများဖွင့်လှစ်ခွင့်လျှောက် ထားသည့် ကုမ္ပဏီနှင့် အဖွဲ့အစည်း များတစ်ခုမှ မရှိသေးဘဲ စုံစမ်းမေး မြန်းခြင်းမျိုးသာ လုပ်ဆောင်နေ ကြောင်း ကော်မတီမှ သိရသည်။ ကော်မတီမှ ကုမ္ပဏီများကို အရောင်းဌာနဖွင့်ခွင့်ရရှိရန်အတွက် အာမခံပေးငွေကို ဒေါ်လာ ၁ သိန်း သတ်မှတ်ထားပြီး မဖွင့်ဖြစ်တော့မှ သာလျှင် ထိုငွေကို ပြန်ရမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ သက်သေပြငွေကိုလည်း မြန်မာငွေကျပ် သိန်း ၃၀ဝ၀ ပြရ မည်ဖြစ်သည်ဟု အသိပေးထား ﻿ကြောင်း အရောင်းစင်တာဖွင့်လှစ်ရန် စုံစမ်းနေသည့် ကုမ္ပဏီတို့ထံမှ သိရသည်။ "သူတို့ သတ်မှတ်ထား တာက ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်ရ မယ်၊ ထားသိုရမယ့် မြေနေရာ ရှိရမယ်နဲ့ ကိုယ်တင်သွင်းတဲ့ ကားမကုန်ရင် မိမိစရိတ်နဲ့ပြန်ပို့ရမယ် ဆိုတဲ့ အချက်တွေပါတယ်။ နောက် ပြီး အဓိက ပြောတာကတော့ Black List မဖြစ်ရဘူးဆိုတာပါပဲ" ဟု ဟွန်ဒိုင်း ကိုရီးယားကားတင် သွင်းမည့် ကုမ္ပဏီက ဆိုသည်။
ကားအရောင်းပြခန်းများ ခွင့် ပြုရန်လျှောက်ထားသူများရှိထား သော်လည်းပဲ ယခုအရောင်းစင်တာ မှာ သီးခြား ခေါင်းစဉ်အနေဖြင့် သွား မည်ဖြစ်သဖြင့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ထပ်မံလျှောက်ထားရန်လိုမည်ဖြစ် ကြောင်းနှင့် သတ်မှတ်ကိုက်ညီမှု ရှိပါက ပေးအပ်သွားမည်ဟု ကော် မတီမှ တာဝန်ရှိသူ၏ ထပ်လောင်း ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ ယခု ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးမည့် အ ရောင်းစင်တာများမှာ ယာဉ်တင် သွင်းခွင့်ရထားသည့် ပါမစ်ရှိသူများမှ ဝယ်ယူရန် အတွက်သာဖြစ်ပြီး နယ်များကို လိုအပ်သည်ဟု ယူဆ မှသာလျှင် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးရန်စဉ်း စားသွားမည်ဟု ကော်မတီထံမှ ထပ်မံသိရသည်။
ကားဟောင်းလဲကာ ကားသစ်တင်သွင်းရန် ပါမစ်ရရှိထားသူများအား အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်နေ့မှစ၍ အင်ဂျင်ပါဝါ ၁၃၀၀ စီစီအောက်ကားများဆိုပါက မော်ဒယ်ကန့်သတ်မထားဘဲ ကားသစ်များအထိ တင်သွင်းခွင့်ပြုမည်
၂၀၁၁ မော်ဒယ်လ်အမျိုးအစားဆိုပါက လက်ရှိပေါက်ဈေး ပျမ်းမျှ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉ မော်ဒယ်လ် အမျိုးအစားဆိုပါက ပျမ်းမျှ ဒေါ်လာ ၈၀၀၀ ၀န်းကျင်ခန့်ရှိသည့် Suzuki Switf, Suzuki R+, Nissan March, Honda Fit ကားအမျိုးအစားများကို တွေ့ရစဉ်
ကားဟောင်းများအပ်နှံကာ ကားသစ်အစားထိုးတင်သွင်းရန် ပါမစ်ရရှိထားသူများနှင့် ပါမစ်ရရှိရန်လျှောက်ထားမည့်သူများအားလုံးကို အင်ဂျင်ပါဝါ ၁၃၀၀ စီစီအောက်ကားများ တင်သွင်းမည်ဆိုပါက အသစ်အတိုင်း တင်သွင်းခွင့်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ကားဟောင်းလဲကာ ကားသစ်တင်သွင်းမည့်သူများအနေဖြင့် ယခုသတ်မှတ်ထားသည့် အုပ်စုအလိုက် မော်ဒယ်အလိုက် တင်သွင်းမည်ဆိုပါက တင်သွင်းနိုင်ပြီး အဆိုပါအမျိုးအစားမော်ဒယ်များအား တင်သွင်းခြင်းမပြုဘဲ အင်ဂျင်ပါဝါ ၁၃၀၀ စီစီအောက်ကားများကို တင်သွင်းမည်ဆိုပါက ၂၀၀၂ ခုနှစ် မော်ဒယ်အထိသာဆိုသည့် ကန့်သတ်ချက်မထားဘဲ အသစ် Brand New အမျိုးအစားကိုပါ တင်သွင်းခွင့်ပြုမည်ဟု သိရသည်။
အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့က နေပြည်တော်ရှိ အမှတ်(၂)စက်မှုဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပသည့် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းကား အရောင်းပြခန်း ဖွင့်လှစ်ခြင်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် အမှတ်(၂)စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်း၊ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာပွင့်ဆန်းတို့မှ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
''အင်ဂျင်ပါဝါ ၁၃၀၀ စီစီအောက်ကားတွေကို သွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ မော်ဒယ်ကန့်သတ်ချက်မထားရှိပဲ ၁၉၉၅ မော်ဒယ်အထက် ကြိုက်တာသွင်းလို့ရပါတယ်။Brand New သွင်းခွင့်ပေးပါမယ်။ မနက်ဖြန်(အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်နေ့)ကစပြီးသွင်းခွင့်ပြုသွားပါမယ်။ ဆီစားလည်းသက်သာသလို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်း Friendly ဖြစ်တဲ့အတွက် ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်'' ဟု စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာပွင့်ဆန်းက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍လည်း'' One Stop Service အဖွဲ့အနေနဲ့လည်း ကားပါမစ်တွေကို နေ့ချင်းပြီး ထုတ်ပေးနေတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အမည်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကားအပ်တဲ့သူမျိုး လျှောက်ထားရင် ပထမဦးစားပေးအနေနဲ့ နာရီပိုင်းအတွင်း ချထားပေးတယ်။SpecialPower နဲ့ လာတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်း အချိန်မီထုတ်ပေးသလို၊ အေးဂျင့်တွေလာရင်လည်း တတိယဦးစားပေးအနေနဲ့ နေ့ချင်းပြီး လုပ်ပေးတယ်။တစ်ကယ်လို့ အချိန်နှောင်းသွားတဲ့အတွက် နေ့ချင်းမရရင်တောင် နောက်တစ်ရက်မနက်မှာ ထုတ်ပေးပါတယ်'' ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများတွင် High-way Police များထားရှိနိုင်ရန် စီစဉ်
ရန်ကုန်-နေပြည်တော် အမြန်လမ်းမကြီးရှိ ၁၁၅ မိုင် ယာဉ်ရပ်နားစခန်းအနီး တစ်နေရာ
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများပေါ်တွင် High-way Police များထားနိုင်ရေးကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့ ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်တွင် ပြု လုပ်သော လမ်းတံတားကြေး ကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲတွင်ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
High-way police များ ထားရှိနိုင်ရေးကို ''High-way Police က နိုင်ငံတကာမှာရှိပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ မရှိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာနည်းတူ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း High-way Police တွေထားရှိနိုင်ဖို့ကို ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပြီး ဆောင်ရွက် သွားဖို့ ရှိပါတယ်'' ဟု ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
''အမြန်လမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာ့ high-way police system တွေထား ရှိနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဥပမာ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမှာဆိုရင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေ ပြောင်းပြန်မောင်းတာတွေ သွားရင်းလာရင်း တွေ့နေရပါ တယ်။ အမြန်လမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာ high- way police တွေထားရှိမယ်ဆိုရင် ဒီလိုစည်းကမ်းမဲ့ မောင်းနှင်တဲ့ယာဉ်တွေကို အရေးယူနိုင်သလို သတ်မှတ်အရှိန်ထက် ပိုမိုမောင်းနှင်တဲ့ယာဉ်တွေကိုလည်း အရေးယူနိုင်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုရှိတာက ရန်ကုန်မှာ ကားတွေကို စာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့ စစ်သလို၊ အမြန်လမ်းမှာ ဆိုင်ကယ်တွေကိုစစ်သလို ခရီးသွားပြည်သူတွေကို high-way police တွေက စစ်သလိုမျိုးတော့ မလုပ်သင့်ပါဘူး'' ဟုလည်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာကြီးတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။
''ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန် လမ်းမှာဆိုရင် ဆိုင်ကယ်တွေ ပြောင်းပြန်မောင်းတာတွေ ရှိတယ်။ ပြောရရင် ဒီလမ်းမကြီးမှာ Road furniture နဲ့ ပတ်သက်တာတွေ မပြည့်စုံသေးဘူး၊၊ ဒါကလည်း ဒီလမ်းက မပြီးသေးဘူးလေ။နောက်ပြီး ရန်ကုန်-နေပြည်တော် မှာဆိုရင်လည်း သတ်မှတ်မိုင်နှုန်းထက် ပိုမောင်းတဲ့ယာဉ်တွေကြောင့် ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်တာတွေ အများကြီးပဲလေ။ လမ်းကတစ်ဖြောင့်တည်းဆိုတော့ ကိုယ်မောင်းနေတဲ့မိုင်နှုန်းကို လျော့မမောင်းတော့ဘဲ မောင်းကြတယ်။ air con ဖွင့်ပြီးမောင်းကြတော့ ကိုယ့်မိုင်နှုန်း ကိုယ်သတိမထားမိတော့ဘဲ အရှိန်တင်မောင်းကြတာများတယ်။ High-way police တွေသာရှိရင် သတ်မှတ်မိုင်နှုန်းထက် ပိုမောင်းတဲ့ကားကို အရေးယူနိုင်တယ်၊၊။ ဒါဆိုရင်ယာဉ်မတော်တဆမှုတွေ လည်းနည်းပါးသွားမှာပါ''ဟုလည်း နေပြည်တော်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ၀န်ထမ်းတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြစ်ကို ဖြတ်၍ ရန်ကုန်- ဒလဆက်သွယ်သည့် ကောင်းကင်တံတား တစ်ခု(သို့မဟုတ်) ရေအောက်ဥမင် လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရန် ကိုရီးယားကုမ္ပဏီတစ်ခု လာရောက်ဆွေးနွေး
ရန်ကုန်မြစ်ကိုဖြတ်၍ ရန်ကုန် -ဒလဆက်သွယ်သည့် ကောင်းကင်တံတား (Sky Bridge) (သို့မဟုတ်) ရေအောက်ဥမင် လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရန် စိတ်ဝင်စားသည်ဟု ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ တစ်ခုက ရန်ကုန် မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ နှင့် လာရောက် ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဒလဘက်ကမ်းကို အခုထက် ပိုပြီးဖွံ့ဖြိုးစေချင်တဲ့အတွက် ဒီလိုလုပ်ဖို့ ဆွေးနွေးသွားတာပါ။ အဲဒီအတွက်လည်း MoU ထိုးရဦးမှာပါ။ နည်းနည်းတော့ ကြာဦးမှာပါ . . .
ကိုရီးယား ကုမ္ပဏီတစ်ခုက အထက်ပါ ပုံစံနှစ်ခုထဲမှ တစ်ခုကို တည်ဆောက်ချင်သည်ဟု အောက်တိုဘာလ ဒုတိယပတ်အတွင်းက လာရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ပြုလုပ်မည့် မြေနေရာများကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
"ကိုရီးယားကုမ္ပဏီကတော့ သူတို့က ဒီကအခြေအနေကို လေ့လာပြီး ကားသွားလို့ရတဲ့ ကောင်းကင် တံတား ဒါမှမဟုတ် ရေအောက်ဥမင် လှိုဏ်ခေါင်းလုပ်ပြီး သမ္ဗာန်တွေ သွားလို့ရအောင် လုပ်ချင်တယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။ သူတို့ကလုပ်ချင်တယ်လို့ပဲ ပြောသေးတာပါ။ အတိအကျ လုပ်မယ်လို့တော့ မပြောသေး ပါဘူး။ မြေနေရာကိုတော့ သူတို့ ကွင်းဆင်းကြည့်ပြီးပါပြီ။ ဒါကသူတို့ ဘက်က လုပ်ခဲ့တဲ့ အပိုင်းပေါ့။ စည်ပင်ဘက်ကတော့ ဒီလိုလုပ်မယ့် အစီအစဉ်ကို သူတို့နဲ့အတိအကျ ပြန်ဆွေးနွေး သွားရဦးမှာပါ။ လုပ်တာတော့ လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟိုဘက်က ခိုင်မာလားဆိုတာကိုတော့ ပြန်စိစစ်ရဦးမှာပါ"ဟု ရန်ကုန် မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ လမ်းနှင့်တံတားဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြစ်ကိုဖြတ်၍ ရန်ကုန်-ဒလ ဆက်သွယ်သည့် ကောင်းကင်တံတား (Sky Bridge) တည်ဆောက်ရန်အတွက် တံတား၏ချဉ်းကပ်လမ်းများ ပြုလုပ်ရန်နေရာ အကျယ်အ၀န်း များများ ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အမှန်တကယ် တည်ဆောက်ဖြစ်လျှင်လည်း မြို့တွင်းဧရိယာများ အတွင်းရှိ အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံများအား လွတ်ကင်းအောင် တည်ဆောက်ရမည့် အခြေအနေရှိနေကြောင်း သိရသည်။ ရေအောက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း တည်ဆောက်ရန် အတွက်မူ လေ၀င်လေထွက်နှင့် လျှပ်စစ်မီး ၂၄ နာရီရရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ လိုဏ်ခေါင်းအတွင်း သွားလာသည့်အချိန်တွင် အရေးပေါ် အခြေအနေများ ရှိလာသည့်အခါ မည်သို့လုပ်မည်နည်း စသော အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်း ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာ များကိုလည်း ထည့်သွင်းရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
"ဒလဘက်ကမ်းကို အခုထက် ပိုပြီး ဖွံ့ဖြိုးစေချင်တဲ့အတွက် ဒီလိုလုပ်ဖို့ ဆွေးနွေးသွားတာပါ။ အဲဒီ အတွက်လည်း MoU ထိုးရဦးမှာပါ။ နည်းနည်းတော့ ကြာဦးမှာပါ။ တကယ် လုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်း ကောင်းကင်တံတား ဆောက်ဖို့ကတော့ နည်းပညာ နည်းနည်းပိုမြင့်တယ်။ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကတော့ အရင်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ တည်ဆောက်ဖူးခဲ့ပြီဆိုတော့ အခက်အခဲတော့ အများကြီး မရှိပါဘူး"ဟု အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူက ဆက်လက်ပြောပြခဲ့သည်။
ယခင်ကလည်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ လမ်းမတော်၊ ကိုင်းတန်း၊ ဗားကရာ စသည့် ကမ်းနားများနှင့် ဒလဘက်ခြမ်း ကိုဆက်သွယ်ရန် ကောင်းကင်တံတားများ ထိုးမည့်အစီအစဉ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ ဖူးသော်လည်း အဆင်မပြေခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
သီလဝါရေနက်ဆိပ်ကမ်းအနီး မြန်မာ-ကိုရီးယား ပူးပေါင်း၍ စီးပွားရေးမြို့တော် တည်မည်
မြန်မာ-ကိုရီးယား ပူးပေါင်း၍ သီလဝါရေနက်ဆိပ်ကမ်းအနီးတွင် စီးပွားရေးမြို့တော် တည်ထောင်ရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ စီးပွားရေးမြို့တော်ကို ကိုရီးယားနိုင်ငံ HANA INTERNATIONAL INC ကုမ္ပဏီက ကန်ဒေါ်လာ ငါးဘီလီယံကျော် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုဖြင့် တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ "သီလဝါဆိပ်ကမ်း အနီးမှာတော့ ဆိပ်ကမ်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တည်ဆောက်ဖို့ နေရာတွေ ရှိတယ်။ စက်မှုဇုန်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မြေနေရာတွေကတော့ အိုးအိမ်နဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်။ အဲဒီနေရာမှာတော့ စက်မှုဇုန် တည်ထောင်ဖို့ နေရာတွေကို သတ်မှတ်ပေးထားတာရှိတယ်" ဟု မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။ စီးပွားရေးမြို့တော်တွင် စက်မှုဇုန်များ၊ မြို့ပြအဆောက်အအုံများ၊ ဟိုတယ်များ၊ စာသင်ကျောင်းများ၊ ဆေးရုံများ၊ ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာများ၊ ဆိပ်ကမ်းနှင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန် အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ "သီလဝါဆိပ်ကမ်းကို MITT ကနေ ရာနှုန်းပြည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ ဆောက်ထားတာ။ အခု ဆိပ်ကမ်းမှာရှိတဲ့ ဆီတံတားတည်ဆောက်တာတွေကိုတော့ ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတွေကို ပေးထားတာတော့ ရှိပါတယ်" ဟု ယင်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ စီးပွားရေးမြို့တော် တည်ဆောက်ရေးအတွက် ကိုရီးယားနိုင်ငံ HANA INTERNATIONAL INC ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူများသည် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ထွန်းအောင်ကို ဇွန် ၁၀ ရက်တွင် လာရောက် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နေ့ထုတ် ရန်ကုန်တိုင်း(မ်) ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
Posted by ပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 3:43 AM Saturday, October 22, 2011 Labels: သတင်းနှင့်နည်းပညာ
ဒါ့အပြင် ပြည်တွင်းရဲ့ သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာ ကဏ္ဍ တိုးတက် မြင့်မားစေဖို့ အတွက်လည်း ရည်ရွယ်ပြီး ပြုလုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုနှစ်ရဲ့ ဆွေးနွေး ပွဲကိုတော့ ဆီဒိုးနား ဟိုတယ်မှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းက စာတမ်း တင်သွင်းလိုသူ၊ လေ့လာ လိုသူတွေဟာ နိုဝင်ဘာလ (၃)ရက်နေ့ နောက်ဆုံး ထားပြီး Conference Secreteriat Office ကို ဆက်သွယ် နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Money Changer Counter စုစုပေါင်း (၅၀) ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြု
မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်သည် အောက်တိုဘာ ၁ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ သိမ်ဖြူလမ်းရှိ Money Changer Counter ကို ဖွင့်လှစ်၍ အက်ဖ်အီးစီ အပါအ၀င် နိုင်ငံခြားသုံးငွေများဖြစ်သည့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ယူရိုနှင့် စင်ကာပူဒေါ်လာတို့အား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လဲလှယ်ခြင်းကို ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံခြားသားများ၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ၊ ပြည်တွင်းနေ နိုင်ငံသားများ အနေဖြင့် တရားဝင်နိုင်ငံခြားသုံးငွေများ လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ စနစ်တကျ လဲလှယ်သုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက် ဘဏ်များ၊ လေဆိပ်များ၊ ဟိုတယ်များ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများနှင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ အများဆုံးသွားရောက်သည့် နေရာများ၌ Money Changer Counter စုစုပေါင်း (၅၀)ကို ဖွင့်လှစ်ရန် အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်မှစ၍ ပြည်တွင်း ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များကို ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ထုတ် မြ၀တီ သင်တင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
BBC withdrew controversal Burmese map from their website
ဘီဘီစီအင်္ဂလိပ်ပိုင်းစာမျက်နှာ၏ မြန်မာပြည်မြေပုံသရုပ်ဖော်ပုံကို မြန်မာတို့ကန့်ကွက်
မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂၊ အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၁
ဘီဘီစီ အာရှပစိဖိတ် အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် အန်နာဂျုံး၏ သတင်းဆောင်းပါး (http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11595983 ) တွင် သတင်းသရုပ်ဖော်အဖြစ် မြန်မာပြည်မြေပုံကို သရုပ်ဖော်ထားရာ မြေပုံ၏ နယ်မြေများ၊ လူမျိုးအမည်များ၊ ဓာတ်ပုံများမှာ အများပြည်သူတို့လက်ခံထားသော အချက်အလက်များနှင့် လွဲမှားဖော်ပြထားသောကြောင့် ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း ပရိသတ် အများအပြားနှင့် မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားသူများက ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှ တဆင့် ကန့်ကွက်ဝေဖန်ခဲ့ကြသည်။ (ဘီဘီစီ ဘားမိစ် ဖေ့စ်ဘွတ်ကို ကြည့်ပါ)
ကိုဝင်းက ထိုသရုပ်ဖော်ပုံကို ဝေဖန်ထားရာတွင် -
၁။ Chin ဆိုတဲ့ နေရာမှာ နာဂအမျိုးသားပုံ မှားထည့်ထားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
၂။ ဒါဟာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေ နေထိုင်မှုကို ပြသတဲ့ပုံမဟုတ်ဘဲ သတင်းထဲ မကြာခဏ ပါတတ်တဲ့ မြန်မာပြည်မှာနေထိုင်တဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ရောက်နေတဲ့ လူမျိုးစုတွေ တည်ရှိရာဒေသလို့ပြန်လည် ဖြေရှင်းချက် ထုတ်ရင်လည်း ထုတ်နိုင်တယ်။ ပုံအောက်မှာ စာတန်းမှ ထိုးမထားဘဲ။ UWSA ပုံ ထည့်ထားတာကိုလည်း ဘ၀င်မကျသူ ရှိနိုင်ပါတယ်။
၃။ ရှမ်း နေရာမှာ မဲထည့်တဲ့ပုံပြထားတော့ ၂၀၀၈/၂၀၁၀ ကို ကန့်ကွက်တဲ့ရှမ်းတွေ စိတ်ဆိုးနိုင်ဖွယ် ရှိပါတယ်။
အထူးအားဖြင့် "အာရကန်"ဟု ရခိုင်ပြည်နယ်ကို စာတမ်းထိုးထားပြီး ဓာတ်ပုံထဲတွင် ရခုိုင်ဒေသ၏ ရခုိုင်လူမျိူးများပုံကို ဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲ "ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး" ဆိုသည့် လူများ၏ ဓာတ်ပုံကို ထည့်သွင်းထားသဖြင့် ထိုသို့ သရုပ်ဖော်ချက်ကို အဓိကထား ဝေဖန်ပြစ်တင်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။
စာရေးဆရာ ဒါရိုက်တာ ချိူတူးဇော်က -
"ဘီဘီစီ တာဝန်ယူဖြေရှင်းဖို့ လိုလိမ့်မယ်"
ဗြိတိသျှ ဆိုတဲ့လူမျိုးဟာ သတင်းမီဒီယာမှာ အမျိုးမျိုး လုပ်ကြံဖန်တီးပြီး နိုင်ငံကိုဝါးမျိုလေ့ရှိတာ သမိုင်းမှာ အထင်အရှားရှိတယ်။ ၁၈၈၅ မှာ ဘုံဘေဘားမားသစ်ခိုးမှုကို လည်ဆည်ပြီး၊ သတင်းမီဒီယာတွေကနေ မြန်မာပြည်ဟာအင်မတန်မှ ရိုင်းစိုင်းတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့အတွက် အုပ်ချုပ်မှုလိုတယ် လို့ အကြောင်းပြ သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်။ ခုလည်း ရိုဟင်ဂျာတွေကို ရခိုင်လူမျိုးပါလို့ လည်ဆယ်လုပ်ကြံ...သတင်းဖြန့်မှုတွေ စ နေပြီ။
ဘီဘီစီ အနေနဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ သိက္ခာရှိတဲ့ သတင်းဌာန ဆိုရင် ဒီကိစ္စကို တရားဝင်ပြန်လည် တောင်းပန်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။
မဟုတ်ရင်တော့ ကျနော်တို့ ဘီဘီစီကို စ သပိတ်မှောက်ရလိမ့်မယ်။
ဘယ်သူ မှောက်မှောက် မမှောက်မှောက် ကျနော် တော့ မှောက်ရလိမ့်မယ်။ ကျနော် နဲ့ ကျနော့် အမျိုးတွေ၊ ကျနော့်မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ၊ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက် တွေ အားလုံးကိုလည်းတိုက်တွန်းရလိမ့်မယ်။
အန်တီစုအပါအ၀င် ခေါင်းဆောင်တိုင်းကိုလည်း တိုက်တွန်းရလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားတို့ ဘီဘီစီ အနေနဲ့ ဒီသတင်းနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဖြေရှင်းတောင်းပန်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
ဟု သူ၏ သဘောထားကို ပြတ်ပြတ်ရေးသားထားသည်
ထိုအချိန် ရက်ပိုင်းအတွင်း မြန်မာစာဖတ်ပရိသတ်များ၏ ကန့်ကွက်ဝေဖန်သံများ အမြောက်အများ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်တွင် တောက်လျောက်ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သည်။ ယမန်နေ့က ဘီဘီစီဝက်ဆိုက်က အဆိုပါအငြင်းပွားနေသည့် ပုံကို မည်သည့်ဖြေရှင်းချက်မျှ မပြန်ကြားဘဲ ၀က်ဆိုက်မှ ဖြုတ်ချထားသည်ဟု ဖေ့စ်ဘွတ်မိတ်ဆွေတို့က ပြောကြားသည်။
ထိုရက်ပိုင်းမတိုင်မီက အမေရိကန်ပြည်၏ အာရ်အက်ဖ်အေသတင်းဌာနတွင် အင်န်အယ်ဒီပါတီခေါင်းဆောင် ဦးတင်ဦးက အဆိုပါလူမျိုးအကြောင်း ၎င်းအမြင်ကို ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်ကို အမေရိကန်ပြည်ရှိ ရိုဟင်ဂျာလူမျိူးများ၏ လူကြီးဆိုသူတဦးက ကန့်ကွက်ခဲ့သည့် သတင်းတရပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်က မြန်မာစာဖတ်ပရိသတ်တို့၏ ဝေဖန်ကန့်ကွက်မှု အများစု၏ အဆိုအရ မြန်မာပြည်တွင်းရှိ အများလက်ခံသော တိုင်းရင်းသားလူမျိူးများတွင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိူးဆိုသည့် အချက်မှာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်နေသည်။ ရခုိုင်ဒေသခံ ရခုိုင်လူမျိူးတို့က အဆိုပါ ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတို့သည် ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျမှာ ပြောင်းရွှေ့ခိုလှုံကြသူ ဘင်္ဂါလီများဟု ပြောကြပြီး၊ နိုင်ငံတကာသတင်းများတွင် မြန်မာပြည်က အဆိုပါရိုဟင်ဂျာလူမျိူးတို့သည် မြန်မာပြည်မှ ဘင်္ဂလားနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသည့် ဒုက္ခသည်များဟု ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။
အာဒမ်ရယ် ဧဝရယ် ဒဿရယ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနှင့် အင်းသီးဇာတ်ကားတို့ကို အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် သွားရောက်ပြသရန် စီစဉ်ထားပြီး နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်နှင့် ၂၀ ရက်နေ့များတွင် လော့အိန်ဂျလိစ်မြို့၌ ပြုလုပ်မည့် မြန်မာရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ပြသရန် ဖိတ်ခေါ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
''အာဒမ်ရယ် ဧဝရယ် ဒဿရယ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ပြသဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာ ပြသမှာပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ နှစ်စဉ်ပြုလုပ်တဲ့ myanmar film festival မှာ ပါဝင်ပြသဖို့ စီစဉ်နေတာပါ။ ပြသတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက သက်မွန်မြင့်နဲ့ ထုတ်လုပ်သူတို့လည်း သွားရောက်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ တခြားမြို့တွေကလည်း အဲဒီဇာတ်ကားကိုပဲပြသဖို့ ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။ မြန်မာလူငယ်ပရိသတ်အများစုက ဒီဇာတ်ကား ကိုကြည့်ချင်ကြတဲ့အတွက် တတ်နိုင်သလောက်သွားပြမယ်လို့တော့ စိတ်ကူးထားပါတယ်''ဟု Heart & Seoul ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှ မခင်စန္ဒာမြင့်က ရှင်းပြခဲ့သည်။
'အာဒမ်ရယ် ဧဝရယ် ဒဿရယ်' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ပထမဆုံးအကြိမ် ပြည်ပသို့ သွားရောက်ပြသမှုအဖြစ် စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် သွားရောက်ပြသခဲ့ပြီး မြန်မာအနုပညာရှင် အနေဖြင့် ဒါရိုက်တာမောင်မျိုးမင်း၊ သရုပ်ဆောင် သက်မွန်မြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူ ခင်စန္ဒာမြင့်နှင့် စာရေးဆရာမ ပုညခင်တို့ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။ ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီး၏ အင်းသီးမှတ်တမ်း ဇာတ်ကားသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများအပြားသို့ သွားရောက်ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။
Ref: Bi Weekly Eleven
မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းမှ ၂ဝ၁ဝပြည့် နှစ် အကယ်ဒမီပေးပွဲအတွက် အကယ်ဒမီဗန်းကိုင်များစတင်ခေါ်ယူ
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းက ၂ဝ၁ဝပြည့်နှစ် အကယ်ဒမီပေးပွဲ တွင် အကယ်ဒမီဗန်းကိုင် အဖြစ် လျှောက်ထားလိုသူများ အတွက် လျှောက်လွှာများ စတင်ခေါ် ယူနေပြီဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ရုပ်ရှင် လုပ်ငန်းမှ၁၃-၁ဝ-၂ဝ၁၁ ရက်က သိရသည်။' 'ဗန်းကိုင်အတွက် လျှောက်လွှာကို အောက်တိုဘာလ လဆန်းလောက်ကတည်းက စတင်ခေါ်ယူနေတာ ပါ။ အောက်တိုဘာလကုန် နောက်ဆုံးထား ခေါ်ယူဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်'' ဟု မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း၏ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ အကယ်ဒမီဗန်းကိုင်အဖြစ်လျှောက်ထားလိုသူများသည် တစ်ကိုယ်လုံးပေါ် အတည့်နှင့်ဘေးနှစ်ဖက် ရိုက်ကူးထားသည့် အလှဓာတ်ပုံများကို ကိုယ်ရေးအကျဉ်းနှင့် တွဲဖက်၍ လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပြီး မြန်မာဝတ်စုံဖြင့် ရိုက်ကူးထားသည့် ဓာတ်ပုံဖြစ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အနုပညာအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖူးသူ မည်သူမဆိုလျှောက် ထားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။၂ဝဝ၉ ခုနှစ် အကယ်ဒမီပေးပွဲ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် အကယ်ဒမီပေးပွဲ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် အကယ်ဒမီပေးပွဲ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် အကယ်ဒမီပေးပွဲ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် အကယ်ဒမီပေးပွဲအတွက် မေဖြူဖြူ၊ စံရတီမိုးမြင့်၊ ပိုးပိုး၊ လှိုင်သဇင်တို့က အကယ်ဒမီဗန်းကိုင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။
Let's see how Lybia's dictator Muammar Gaddafi has
changed in the last 30 years
More info : http://groups.google.com/group/mayanmardailymail/subscribe
Computer Technical Notes & Sharing Software
Myanmar Digital Satellite Navigation Gathering
You received this message because you are member of
"Myanmar Daily Mail" group. To post to this group, send email to
mayanmardailymail@googlegroups.com To unsubscribe from this group, send email to
http://groups.google.com/group/mayanmardailymail If you need any help, you can contact admin@mee-pya-tite.com & forall85ster@gmail.com & simpleviews2010@googlemail.com.
ဘီဘီစီ ကို အားပေးကြပါတယ် (၇) (၈) (၉) (၁၀)
ဘီဘီစီ ကို အားပေးကြပါတယ် (၇)
Posted by ဒေါ်လာစား on 06:34
Kobo Bo ထမင်းတစ်လုတ်အတွက် ဒီကောင်တွေ လုပ်စားနေတာ ကွ
Khaing Minko BBC ၀ိုင်းတော်သားအတဖွဲ့မှာပါတဲ့ ရခိုင်သား ဦးအောင်ကျော်ဇံ ခင်ဗျာဒီတိုင်းကြည့်နေတာ ခင်ဗျာ အဖေက ဘင်္ဂလီတောကလားဖြစ်လို့လား ရခိုင်လူမျိုးထဲမှာ ဘင်္ဂါလီတောကလားနဲ့ညားတာ ခင်ဗျားအမေတယောက်ပဲရှိတာကို ခုမှသိလိုက်ရပါပြီ။
Thazin Monထမင်းတစ်လုတ်အတွက် တိုင်းပြည်သမိုင်းကို လိမ်သော ဘီဘီစီဝိုင်းတော်သားများ....
Chris Soe BBC လိမ်နေသည်... BBC ညာနေသည်....BBC အမျိုးဘာသာ သာသနာကိုဖြတ်ဆီးနေသည်... BBC မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကို ရိုဟင်ဂျာကလားဇက် သွင်းနေသည် ...
Thwaythit Sar ဘီဘီစီက မြန်မာတွေ အမျိုးပျောက်မှာထက် ခင်ဗျားတို့ အလုပ်ပြုတ်မှာကို ပိုပြီး ကြောက်နေကြတာလား.. ပထွေးကို ကြောက်နေကြတာလား ဒေါ်လာကို မက်နေကြတာလား... စောက်ရှက်မရှိ စောက်ခွက်ပြောင်မနေနဲ့ တင်းးး လာပီ... :(
Ispirit Arakanism everybody who is writing on this page , pls make ur profile picture with this anti BBC picture , let us show anti bbc picture on BBC page
Thwaythit Sar ဘီဘီစီကို Like မလုပ်ရေး ....... ဒို့အရေး။ မဟုတ်မမှန်သော သတင်းတွေ ရေးသား ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ ဘီဘီစီကို နားမထောင်ရေး ....... ဒို့အရေး။ ရခိုင်ညီအစ်ကိုများနှင့်တကွ... ပြည်သူများအား ကျေနပ်သည်အထိ ဘီဘီစီမှ တောင်းပန်ရေး ...... ဒို့အရေး
Khing Minn Nyo BBC ခင်ဗျ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ဂဂဏဏ မသိဘဲ ထုတ်လုပ်ဝေဖန်ရေးသားပြောဆိုခြင်းဟာ မကောင်းပါဘူး.. အထူးသဖြင့် လူမျိုးတစ်မျိုးကို အပြည့်အဝစော်ကားလိုက်သော ခင်ဗျားတို့အတွက် လေ့လာလို့ရအောင် အောက်က လင့်ကလေးတွေကို ဖတ်ပြီး နဖူးထက်လက်တင်စဉ်းစားပြီး ငါတို့ပြောတာလွန်သွားပြီလားဆိုတာကို တွေးကြည့်လိုက်ပါဦး...... ခိုင်မင်းညို
Thantzin Win ဦးဝင်းဖေ တို့လဲ ဘယ်ရောက်နေလဲခင်ဗျား၊ VOA ကို အပီးပြောင်းသွားပီလား။ွကြားရာအရပ်ကနေ BBC ကိုကန့်ကွက်ပေးပါ။
Pan Ya Moe ဘင်္ဂလီကုလားတွေကို..ရိုဟင်ဂျာနာမည်သစ်နဲ့ ..ရခိုင်ပြည်ကိုဘင်္ဂလီကုလားပြည်ဖြစ်အောင် လဘ်စားပြီးဘီဘီစီကမဟုတ်မမှန်သတင်းတွေကိုမီဒီယာတက်အောင်ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုချိုးနှိမ်ပြီးဘင်္ဂလီကုလားတွေကိုကြောက်နေတဲ့ မဟုတ်မမှန်ဘီဘီစီအသံလွင့်ထုပ်ချက်များကိုကန့် ကွက်သပိတ်မှောက်ပါတယ်...
Seiko Su အမှန်တရားအတွက်ဆိုရင် မှန်မှန်ပြောရဲရမယ် သတင်းမှန်တွေလွင့်ပါတယ်လို့ နာမည်ကောင်းဟစ်နေတယ် ဘီဘီစီ အခုတော့ သွားပြီ
ရာဇ၀င်တွေလည်းရိုင်းခိုင်းခဲ့ရပြီ အဘိုးရေ ................သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းကြီးေ၇
Myo Lynn BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်။
Myat Thein Tun ဘီဘီစီ၏ ပြန်ကြားစာဖြစ်ပါတယ် ကျေနပ်လက်ခံစရာ အချက်တစ်ခုမှ မပါသေးပါဘူး ဖတ်ကြည့်ပါ (Thank you for your comments. The map was not intended as an exhaustive look at every minority group in Burma. Rather it was intended to flag up minority peoples in Burma's border regions who are prominent because they are engaged in either disputes or conflict with the Burmese government. The line linking the Rohingya to Arakan state was not intended to imply ownership of the state or to marginalise the Rakhine people, but simply to show readers the state in which the Rohingya live. The text linked to the image of the Rohingya makes it clear that they are not granted Burmese citizenship. We have now adjusted the line on our map to giveaclearer picture of where the Rohingya are to be found. We have also addedasection featuring the Rakhine people.
Thwaythit Sar : ခိုင်ပြည်မှာ ရခိုင်လူမျိုးပဲရှိတယ်။ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဆိုတာ မရှိ။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့သူတွေက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ငတ်လို့၊ ဒုက္ခရောက်လို့ ရခိုင်ပြည်မှာ အလုပ်လာလုပ်သူတွေဖြစ်တယ်။ အချိန်ကြာလာတော့ သူတို့ကလည်း မြန်မာပြည်ရဲ့  ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဖြစ်တယ်လို့ တောင်းဆိုလာကြတယ်ပေါ့။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့နာမည်က လံကျုတ်ကြီး ဖြစ်တယ်
Thwaythit Sar BBC ဆိုတဲ့သမီး စောက်ရှက် မရှိ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ လိုက်ပြေး လို့ ကန့်ကွက်နေရတာ ကျနေတာပဲ... များပီ... စောက်ရှက်ကို မရှိကြဘူး.. ဘီဘီစီက ကောင်တွေက.. :(
Myo Thet : ရခိုင်ပြည်ကို ဒုက္ခအမျိုးမျိုး ပေးနေတဲ့ကောင်တွေကို ရခိုင်လူမျိုးနဲ့ လာမယှဉ်နဲ့.... ကျုပ်က ဗမာဆိုပေမယ့်... လူမျိုးရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင်... ရခိုင်တွေကို အရမ်းလေးစားတယ်... ကဲ့.... BBC ဘာလုပ်မှာလဲ.... ခွက်ဆွဲ တောင်းစားချင်ရင်တော့ ငြိမ်နေပေါ့ကွာ... ပြည်သူလူထုနဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေ ကျေနပ်လောက်အောင်.. တောင်းပန်ပေတော့...
Myo Thet : မတောင်းပန်ရင်တော့ ကုလားစုတ် ရိုဟင်ဂျာတွေ ကျွေးတဲ့ထမင်းလုတ် စားနေတယ်ဆိုတာ... သိသာလွန်းနေမယ်နော်... နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြလို့ ... နေရာကောင်းဝင်ယူပြီး အသံကောင်းဟစ်မယ်ဆိုရင်တော့... သေဖို့သာ ပြင်ပေတော့... အွန်လိုင်းကနေ BBC မကောင်းကြောင်း ဖျက်ပြမယ်...
Thwaythit Sar : BBC မင်းတို့ ရှင်းပြတာကို လက်ခံလိုက်မှ.. ရိုဟင်ဂျာက.. မြန်မာအစိုးရနဲ့ မတဲ့ပဲ ပဠိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသား လူအနည်းစု စာရင်းဝင်သွားတော့မယ်... မလှိမ့် တပတ်နဲ့ အကြောင် ရိုက်ပြီး ရိုဟင်ဂျာကို လက်ခံအောင် လုပ်နေတယ်... စောက်ရူးတွေ.. :(
Thazin Mon ဘီဘီစီ...... မြန်မာ ပြည်သူလူထုနဲ့ ကမ္ဘာကို ဝန်ချတောင်းပန်ပါ
Kyaw La Pyi Wunn : ကဲ BBC ရေ , Freedom of Speech နဲ့ Freedom of Expression ဟာ မှန်ကန်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အနှစ်သာရ တွေ ဖြစ် ပေမဲ့ တစ်ဖက်မှာလည်း မှန်ကန်တိကျ မှူ, အထောတ်အထားခိုင်မာမှူ နဲ့ Respect ဆိုတဲ့ လေးစားမှူလေး ရှိသင့်ပါတယ် ...ဒါဆိုရင် ဘာကိုသဘော ပေါက်သင့်တယ် ဆိုတာ နားလည်သင့် ပါတယ်နော်...
ဦး စစ်မင်း : စောက်ရှက် မရှိတဲ့ ဘီဘီစီ ငါတင်တဲ့ ပိုစ်တွေ ကို ဘာလို့ ဖျက်ပစ်တာလဲ ..ငါ ဘာမှ မဆဲထားဘူးနော်..။ မရှ့က်ဘူးလား .. အမှန်တရား ဆိုတာ ကိုယ်မှားတဲ့အခါ ခံစားရတာ ခါးသက်သက်ပဲ.. ကိုယ်ပြုတဲ့ ကံ ကိုယ့်ထံပြန်လာတယ်လို့ ပဲ မှတ်လိုက်စမ်းပါ..။
(မရှက်တတ်ရင် ဤကွန်မန့် လဲ ဖျက်နိုင်သည်..။)
Ko A Arakan : လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ သမိုင်းကို ခွဲခြားသိတတ်ဖို့ လိုတယ် ဘီဘီစီ။
Rakha Thandar Dear BBC ...Now you already change photo again.But you are wrong again.If you like to share our country Map.Don't put Rohinjar photo.That why? They( Rohinjar) are Illegatenant from Bangali to Myanmar.Now all Myanmar request to you.Please..
Thwaythit Sar : မဟုတ်မဟတ် ပို့စ်လေးကို အပေါစား လူပိန်းတွေကို ရှင်း ပြသလို ပီးရင် ပြီးရော ရှင်းပြီး တိုင်း လက်ခံရအောင် ငါတို့က ငတုန်းတွေ မဟုတ်ဘူး ဘီဘီစီ... မင်းတို့ ရှင်းပြတာကို ဘာမှ မစဉ်းစားပဲ ခေါင်းငြိမ့် လက်ခံလိုက်ရင် ရိုဟင်ဂျာဟာ.. မြန်မာလူမျိုးထဲက လူနည်းစု ဖြစ်တော့မယ်... ငါတို့ကို ပြန်မပြောတာ မင်းတို့က ရှင်းပြတာယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ ဆိုတဲ့ သဘောလား... :(
Thwaythit Sar ဟားဟားဟား.. BBC World Service က ဝေါ ရော ကွန်မန့် ပေးခွင့်ပါ ပိတ်သွားပီ... စောက်ရှက်ပဲ... ဟဟဟဟဟဟ :P
Phonemyint Kyaw : BBCရေ.. ဧရာဝတီမြစ်ကြီးက တယုတ်ပြည်ထဲက စီးလာတာပါလို့ ညာပါဦး.. မေ့နေမှာစိုးလို့ ပါ..
Nikki Thein BBC Burmese isarubbish
Shun Izaki : ဘီဘီစီကို unlike ပေးခြင်းဖြင့်ကန့်ကွက်ကြပါ...လူမျိုးနဲ့သာသနာပျောက်မယ့်အရေးကကာကွယ်ကြပါ...သောက်ရမ်းမိုက်ရိုင်းတဲ့ကောင်တွေ...
Ko Tun BBC မှမြန်မာပိုင်းအသံလွှင့်ဌာန တာဝန်ရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ ခင်ဗျား ...........။
ငွေမျက်နှာကြည့်ပြီး အထက်ကခိုင်းတိုင်း လုပ်မလုပ်ပါနဲ့။ ဗိတိန်မှာ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားပါတယ်။ ကိုယ်မကြိုက်ယင် မလုပ်ဘဲနေနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ ခြိမ်းခြောက်ပြီးမခိုင်းပါဘူး။ အဲ .... ပိုက်ဆံလိုချင်လို့ သူတို့ခိုင်းသမျှကို ခေါင်းငြိမ့်မယ်ဆိုယင်တော့ တခြားဟာလုပ်ပေးလိုက်ပါ။ သူတို့ကျေနပ်မှာပါ။
ဘီဘီစီ ကို အားပေးကြပါတယ် (၈)
Posted by ဒေါ်လာစား on 18:35
Yin Moore T ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်လူမျိုးမှမထောက် စတာလင်ပေါင်နဲ့ ကိုယ့် နိုင်ငံကို ရောင်းစားရတယ်လို့...ငါတို့ကလူငယ်တွေဆိုဘယ်မယ့် နင်တို့ထက်သာတယ် အသိရှိတယ် ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်အမှန်တရားဖက်မှ ရည်တည်ပေးနေကျတာ နင်တို့မြန်မာ့သမိုင်းကိုမသိရင် မြန်မာပြည်ကိုလာခဲ့ နင်တို့ကျမှ .......တယ်ငါမပြောလိုက်ချင်းဘူး
Micro Sin အသာနေ အသာနေ ဆိုပြီး ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလို မျက်နှာလွဲခဲပစ် နေကြမယ်ဆိုရင် အသေနာကုန်မယ် မြန်မာတိုင်းရင်းသား အပေါင်းတို့ အသေမနာအောင် အသာမနေကြပါနဲ့ 
Sliv Mmc PLs remove Rohinja from the map of our country. Save your reputation . we have nothing in common with rohinja.we may have rakhine who are muslims but not rohinja.Delete Rohinja straight away. The other ethnics on the map are not minorities. They are majorities . It's one more mistake in that news. Anna Jones, British never feel shy to confess their mistake and never hestitate to correct it. Be british to save their reputation.Thank you.
Nay Aung we hate BBC. Shameless BBC. Get out
Thar NGe bbc မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကို ရပ်တန့်ပေးပါ..............
Naing Naing Htoon @@ မြန်မာနိုင်ငံမှ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ထွက်သွားတဲ့ BBC ၀ိုင်းတော်သားများ... ဆဲရင်လဲ ငြိမ်နေတယ်.. ၀ဋ်ဆိုတာ လည်နေတယ်နော်.. ငါ့တုိ့ဆီမှ မကျဘူးလို့ မပြောနဲ့... မင်းတို့ဆီမှာ မကျခဲ့ရင်.. မင်းတုိ့ရဲ့ ဆွေးမျိုးသားချင်း၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေဆီကို ရောက်သွားရမယ်.... အနှေးနဲ့အမြန်တွေပါဘဲ... မင်းတို့လဲ ပညာတတ်ဘဲနော်...ဒါတွေဟာ ဘယ်ဘာသာဝင်ဘဲဖြစ်ဖြစ်..... university Truth!!! တွေဘဲ....
Sliv Mmc You have to remove Rohinja from the map if you pay respect those who always support and listen your news and to save your reputation. Do not let your reputation go because of the mistake. Rohinjas are not one of our ethnics or minority. They are not recognised not only by the government but also the whole nation. They shouldn't be there and they will never be there.
Yin Moore T ( BBC မှာလက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့ မြန်မာမာတွေ ) သူတို့အပေါက်တွေမာ စတာလင်ပေါင်ဝင်နေတာလား ဒါမှမဟုတ် ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ တွေရဲ့ဘာတွေကို ဘာတွေလုပ်ပေးနေရလို့မှမသိတာ။ နင်တို့မိသားစုဝင်တွေ စီတီစင်ဖြစ်လို့ ကျန်တဲ့လူတွေ ကို ဂရုမစိုက်တော့မလုပ်ပါနဲ့ နင်တို့လို အသားထဲက လောက်ထွက်တဲ့လူတွေဟှိလို့
Moez Mzz :ball BBC Burmese :ball ... :ball ... :ball !!!!!!!!!!!!!
Lwin Mg Mg Zaw WED ညဆို တိုက်ရိုက်ဖုန်းဆက်ပြီး ဆွေးနွေးခန်းရှိတယ်... အဲကျမှ ဆက်ပြီး ဆဲကြမယ်ကွာ... သတိထားနေ BBC Burmese ရေ.....
Thi Ha ခွေးသားကို ဆိတ်သားယောင်ဆောင်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေကိုရောကြွေးဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ ခွေးသားတွေကပူတယ်ဆိုတာ မြန်မာပြည်သူ တရပ်လုံးကသိပြီးသားဗျ။ ယောင်ပြီးစားမိလိမ့်မယ်လို့ မတွေးမိလေနဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက ခွေးတွေကလူကိုမြိုသွားခဲ့ပုံကို အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှားဆီကနေ သင်ခန်းစာကောင်းကောင်းကြီးရပြီးသားဖြစ်နေလို့ပါခင်ဗျာ။
Thwaythit Sar အရှက် မရှိတဲ့ ဘီဘီစီ ငါ့တို့ လူမျိုးတွေထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မရှိဘူး... ရခိုင် ညီအစ်ကိုများနှင့် ပြည်သူအများ ကျေနပ်အောင် အခုချက်ချင်း တောင်းပန်ကြပါ....
Sliv Mmc Whatever it is , do not think that you gonna be recognised as our ethnic. No way. NEVER. EVER. Nowadays, The name of Rohinja is abused byagroup of muslims who are seeking asylum. They have never been to Rakhine and become Rohinja for their sake.so funny.
Sliv Mmc I don't mind and care what religions they are. It's their own choice. However, I will never accept rohainja as our ethnic. Only Rakhine will be recognised in our country.
Tun Minn ဘီဘီစီကကောင်တွေကောင်မတွေငွေပေးရင်ထဟောင်တာပဲလား ဒီလောက်ငွေလိုနေရင်လည်းမင်းတို့နင်တို့ရဲ့ ညီမတွေကိုရိုဟင်ဂျာတွေကိုပေးရောင်းလိုက် သမိုင်းမသိ ရာဇ၀င်နားမလည်ရင်မြန်မာနိုင်ငံပြန်လာပြီးမြန်မာစာသင်လိုက်အုံး တသက်လုံးအထင်ကြီးလာတဲ့ကမ္ဘာ့သတင်းမီဒီယာကြီးကလူတွေမြက်စားနေမှန်းအခုမှသိတယ်
Akai Demon အရူးတွေ။။။။။။။။။။။။ BBC သတင်းထောက်တွေလုပ်နေပြီး သောက်သုံးနည်းနည်းလေးမှမကျပဲ
Ko Tun မင်းတို့ BBC က မြန်မာအစိုးရကို ဖိုက်နေတာ... ဒီမိုကရေစီအတွက်မဟုတ်ဘူး မြန်မာပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ဖို့မဟုတ်ဘူး မင်းတို့ လိုချင်တာက အရိုင်း ကောင်တွေအတွက် ပြည်နယ်လိုချင်တာ အဲဒီအတွက် ဒီမိုကရေစီဗန်းပြပြီး သွေးရူး/သံရူးအော်နေတာ ပြောလိုက်မယ် ... အဲကောင်တွေက ပြည်နယ်ရပြီးယင် နိုင်ငံတည်ထောင်ခွဲထွက်မှာ သူတို့မှာလမ်းစဉ် ၂ ခုဘဲရှိတယ်( လူပွားမယ်။ ဘာသာရေးချဲ့ထွင်မယ် )
Nikki Thein : BBC Burmese isarubbish
Ko Tun အမျိုးမဖျက်ပါနဲ့။ သူတို့ခိုင်းတာက တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို ထိခိုက်မယ်ဆိုယင် ရဲရဲရင့်ရင့် နဲ့ အဲဒီအလုပ်ကချက်ချင်းထွက်လိုက်ပါ။ တိုင်းပြည်ကို ဘင်္ဂါလီ ပြည်ဖြစ်အောင်မကြိုးစားပါနဲ့။ ဆန္ဒရှိယင် ရိုဟင်ဂျာတွေကို ကိုယ်တိုင်ယူပြီး လူမဟုတ်/မျောက်မဟုတ် တွေမွေးပေးလိုက်ပါ။ မြန်မာပြည်ကို ဒုက္ခမပေးပါနဲ့။
Ko Tun : BBC မှမြန်မာပိုင်းအသံလွှင့်ဌာန တာဝန်ရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ ခင်ဗျား ...........။ ငွေမျက်နှာကြည့်ပြီး အထက်ကခိုင်းတိုင်း လုပ်မလုပ်ပါနဲ့။ ဗိတိန်မှာ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားပါတယ်။ ကိုယ်မကြိုက်ယင် မလုပ်ဘဲနေနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ ခြိမ်းခြောက်ပြီးမခိုင်းပါဘူး။ အဲ .... ပိုက်ဆံလိုချင်လို့ သူတို့ခိုင်းသမျှကို ခေါင်းငြိမ့်မယ်ဆိုယင်တော့ တခြားဟာလုပ်ပေးလိုက်ပါ။ သူတို့ကျေနပ်မှာပါ။
Gipsy Moe Tein : Anna Jones (anna.jones@bbc.co.uk) and also her personal email amajones@btinternet.com
As you said , (BBC myanmar programs received the comments about this map and contacted BBC online news .) it means you don't know about this aritcle and do not have any responsibilities on it. Like that ???? If so, I would like to know how they confirm and publish the articles . Without confirmation with natives ???? Or you ( who are working at BBC ) agreed it without consideration ?? Now it's time to remove rohinja from the map. Be brave to be Burmese.
Thar NGe : ခွေးမသား ဘိဘီစီ................. အေးပေါ့ကွာ ခွေးလိုဆဲလည်းနာမဲ့အမျိုးထဲမှာ မင်းတိုမပါဘူး ဘာလိုလဲဆိုတော့ခွေးသားတွေကိုဟားဟားဟား
ခိုင် မင်း ညို .... ၁၃၅ မျိုးသော မြန်မာတိုင်းရင်းသားများသည် တဆင့်တက်၍ ခင်ဗျားတို့လုပ်ရပ်များကို ရပ်တန်းက ရပ်စေရန်... တိုင်းပြည်သစ္စာကို စောင့်သိသောအားဖြင့်... BBC World Service ကိုတက်၍ တကမ္ဘာလုံးသိအောင် ကန့်ကွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
Lynn Ei တခုလောက်မေးပရစေ BBC Burmese မှာဗ မာတွေလဲပါတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟင်။ကိုယ့်နိုင်ငံသမိုင်းကြောင်းကိုမဟုတ်မမှန်တာပြောနေတာကိုငြိမ်မနေကြပါနဲ့အကိုအမတို့ရယ် ။အခု မြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်လဲမြန်မာလူမျိုးဖြစ်နေ သ၍တော့နဲနဲလောက်လှဲ့ကြည့်ပါအုန်း အရေးတယူလုပ်ပါဦး
Gipsy Moe Tein အရင်ကတည်းကကို အထင်မကြီးတာ စောက်တလွဲကြီး လွှင့်နေလို့
Gipsy Moe Tein အချိန်ကပဲ စကားပြောပြော ကြိုက်တဲ့ဟာက စကားပြော သေချာတာကတော့ ကချင် ကယား ကရင် ချင်း မွန် ဗမာ ရခိုင် ရှမ်းပဲ ရှိတယ်
Aung Phyo Ko : BBC ကကောင်တွေ မြန်မာမဟုတ်ကြဘူးလားကွ
Redd Sticker without သောက်ရှက်တွေနဲ့ ဒေါ်လာတွေမြင်ပြီး အမျိုးကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ လူ့အောက်တန်းစားတွေလေ
Khaing Minko မြန်မာ့သမိုင်းကိုလိမ်တာ ရိုဟင်ဂျာက သူတို့လူမျိုးအတွက်လိမ်တာပါ BBC ကတော့ သူတို့မိသားစုဝမ်းရေအတွက်ကွ မြန်မာပြည်သူတွေ မှတ်ထားကြ ဒါကို BBC လို့ခေါ်တယ် ကွ....
ဦး စစ်မင်း အရှက် အကြောက်ကို တစ်ပြား သားမှ မရှိတဲ့သူတွေ ကွာ.. အင်းလေ ဒါကြောင့်လဲ ရခိုင်နယ် ကို ကုလားနယ်လို့ ဗြောင်သတ်မှတ် ရဲ တာေ-က်ရှက် မရှိတာ သိသာနေပါပြီ..။ BBC မြန်မာ ပိုင်းအစီအစဉ်က မြန်မာတွေ မူစလင် တွေနဲ့ ညားနေပြီထင်ပါရဲ့ .။
ကြယ် စင် လင်း ဦး စစ်မင်း ဒါဟာ အမျိုးသားရေးပါ .. လူမျိုးတွေ ခွဲနေလို့မဖြစ်ပါဘူး.. ရခိုင် ညီ အကို မောင်နှမ တွေ နဲ့ အတူ တစ်စည်းတစ်လုံးထဲ ရှိကြပါ..
Thar Ma you should apologize the people who are living in arakan!
Myo Thant ရိုးသားပါbbc
Goldenmrauk Oo Goldenmrauk Oo မိုးသီးဇွန် ဒီလောက်တောင် လူအခွင့်အရေးကို သိတတ်နားလည်နေတယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားညီမနဲ့ အဲကုလားတွေနဲ့ ပေးစားလိုက်ပါလား။8888 ဆိုတာကို ထပ်ခါထပ်ခါ ပြောပြီး ဆရာကြီးလေသံနဲံ့ လာစားမနေနဲ့။ခင်ဗျားက ကြောက်လို့ နိုင်ငံကြီးတွေကို ထွက်ပြေးသွားတာလေ။ကိုမင်းကိုနိုင်၊ကိုဌေးကြွယ်၊တို့နဲ့ ခင်ဗျားနဲ့ တစ်ခြားစီပဲ။ဟို မြကြီးဆိုတဲ့လူရဲ့သမီး ကုလားမ ဝေနှင်းနဲ့ ပေါင်းပြီး ရိုဟင်ဂျာအရေးတောင်းဆိုနေပြီထင်တယ်။ဒေါ်လာတွေ တော်တော်ရနေမှာပေါ့နော်။ဟဟဟ။
Cho Yee Latt ငွေပုံပေးတိုင်း မဟုတ်တာပြော...မဟုတ်တာလုပ်...မဟုတ်သတင်းဖြန့် ပြီး ...လူ့ အကျိုးစီးပွားနဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ခိုင်းရင်တော့လေ...ငါနေနေတဲ့ အိမ်မီးရှို့ ပြီးတစ်ဆွေတစ်မျိုးလုံး သတ်ပစ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်တောင် မလုပ်ပေးဘူးမှတ်။
Seiko Su ဟေ့ ဘီဘီစီ ယုံကြည်ထားလိုက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှန်တယ်ဆိုရင် အမှန်တ၇ားကို ပြောရဲလား ဆိုရဲလား ပြောရဲတယ်ဆိုတယ်ဆုိုရင် နာမည်နင့် လိပ်စာကို ပြောပြလေ
Burma Muckraker သင်တို့ ရဲ့Profile တွေ မှာ ဘီဘီစီ ကို ကန့် ကွက် တဲ့ ပုံ တွေ တင်ပါ။ ရေဆုံးရေဖျား ဆန့် ကျင်ပါ။ လစ်ဗျား မှာ ကဒါဖီ ပြုတ် ဖို့လူသောင်းချီ သေပြီး ၈ လ တော်လှန်ရတယ်။ သင်တို့ရဲ့ လုံ့ လ က ပိုအားကောင်း လာရင် ဘီဘီစီ မြန်မာ ပိုင်း အစီအစဉ် တင် မကဘူး ။အင်္ဂလိပ် ပိုင်းပါ သွက် ချာပါဒ လိုက်ပါ နိုင်ပါတယ်။
Thet Aung Whatashame BBC, Bad for Burma Company.
စစ် ငြိမ်း ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ အသံလွှင့်ဌာန ဆိုရင် တောင်းပန်ပါ.........
Asoeya Thit ခေတ်အဆက်ဆက် တပ်မတော်နဲ့ အငြိမ်းစား တပ်မတော်ဝန်ထမ်းဟောင်းများဟာ တိုင်းပြည်ကို သစ္စာ မဖောက်ကြပါ။ မြန်မာလူမျိုးများအပေါ်ထားရှိသော နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ စေတနာကို နားလည်နိုင်ကြပြီဟု ယူဆပါသည်။ ပြည်ပအားကိုး ပုဆိန်ရိုး မလုပ်ကြပါနှင့်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် လာပူးပေါင်းပါ။ ပြည်တွင်းမီဒီယာအားကောင်းဖို့ လိုသည်။ မီဒီယာကို မီဒီယာဖြင့် တိုက်ကြပါစို့။ Facebook ကနေလည်း ကန်ပိန်း လုပ်ပါ။ Blog ကနေလည်း ကန်ပိန်း လုပ်ပါ။
Royal Angel BBC ,BBC နဲ့ တောက်ထင်ကြီး မိတာ .. တကယ်တော့ ရိုဟင်ဂျာ က ခင်ဗျာတို့ အမျိုး ကိုး .. မြန်မာနိုင်ငံ သားတွေနဲ့တော့ အမျိုး လာမတော်နဲ့ လေ .. ကလေး သွားမေးတောင်သိတယ် .. ရှက်တတ်ကြပါအုံး ..
Micro Sin တော်တော်ပေကပ်ကပ်နိုင်တဲ့ BBCပဲ ရွာကငါ့ဘကြီးနွားတောင် ဒီလောက်ပေကပ်ကပ်မနိုင်ဘူး
Yan NaungBBC = Brainless Bullshit Community Am I correct???
Cho Yee Latt VOA and BBC sky-full of Liars. :D :D
ဘီဘီစီ ကို အားပေးကြပါတယ် (၉)
Posted by ဒေါ်လာစား on 03:40
ကျင့်ဝတ်သိက္ခာမဲ့သော သတင်းဌာန တဲ့
ရိုဟင်ဂျာ ပြည်နယ် လဲ ပါ
ဘီဘီစီက မွတ်စလင် ရိုဟင်ဂျာ အတွက် ဗုဒ္ဓဘုန်းကြီးကို ဒီလိုပြောတယ်တဲ့
ဘီဘီစီ ကို အားပေးကြပါတယ် (၁၀)
Posted by ဒေါ်လာစား on 10:55
Nyan Wint Aung BBC သတင်းဌာနကမရိုးသားဘူးနော်။မြန်မာပြည်အပေါ်ကောက်ကျစ်တဲ့သဘောထားရှိတယ်။
ပိုစ့်မော်ဒန် သာဂိ ဘီဘီစီ=နွားထူ နွားပိန်း နွားထီး နွားမများ နေထိုင်ရာ (နွားနဲ့နှိုင်းတာခင်ဗျားတို့အတွက်တော်တော်ဂုဏ်ရှိသွားပြီမှတ်)
Thu Rhain Aung တကယ်တန်းကျတော စစ်အစိုးရကို မကောင်းပါဘူးလို့ တောက်လျှောက်အော်လာတဲ့ မင်းတို့ကမှ တကယ်မကောင်းတာ။ မင်းတို့ထက် စစ်အစိုးရက ပိုပြီးခေါင်းကောင်းသေးတယ်။
Lwin Mg Mg Zaw : ဒီမိုကရေစီလို့ မင်းတို့သတင်းဋ္ဌာနကနေ ခဏခဏ မအော်နဲ့... သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် မရှိဘူးလဲ မင်းတို့ ပါးစပ်ကနေ ပြောမနေနဲ့... အဆိုးမြင်ဝါဒီ နဲ့ ကြည့်တတ်တဲ့ မင်းတို့ ကို မင်းတို့ ပြတ်ရှက်တတ်ဖို့ ကောင်းတယ်.....(ရှက်တတ်မယ် ဆိုရင်ပေါ့ကွာ)....
Matgyi Bumi bbc ၀ိုင်းတော်သားများဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပေမေ့ဘုရားကိုရှိခိုးပါနဲ့တော့ကုလားကိုပဲ၇ှိခေါပြီအိပ်ပါတော့
Kaung Myat Oo ပြည်တွင်းကအကျပ်အတည်းတွေကြားမှာ လှုပ်ရှားနေရတဲ့ မီဒီယာတွေနဲ့ယှဉ်တော့ ခင်ဗျားတို့ BBCကလူတွေက ဒေါ်လာစားတွေဆိုတာပေါ်လာတယ် အလကားကောင်တွေကောင်မတွေပဲ ပြည်သူကိုဗန်းပြပြီးလိမ်စားတာရပ်တော့Lwin Mg Mg Zaw ပြည်သူကြားက ပြည်သူစကားဆို.... ကျနော် တစ်ခါတည်းတောင်းဆိုမယ်...... ဘာမယ့်အပတ် စနေနေ့ ညနေပိုင်း အစီအစဉ်မှာ ထည့်ပေးပါ... ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာ မြန်မာတိုင်းရင်သားမဟုတ်သလို BBC Burmese ရဲ့လိမ်လည်လှည့်ဖျားမှု့အတွက် ပြည်သူကို တောင်းပန်ပေးပါ.... ဥပမာ.... ကျနော်တို့ အခုလို အမှားအတွက် BBC မှ တောင်းပန်ပါတယ် ဆိုတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းပဲ...... ကဲ မင်းတို့ပြောနေတဲ့ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် စောင့်ကြည့်ကြရသေးတာပေါ့ကွာ.....
သစ်လွင် မျိုးဆက် ဒီလောက် ပြည်သူတွေ အပြင်းအထန်ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြနေတာကို လျစ်လျူရှုနေတဲ့ VOA, RFA, Irrawaddy, Misleading News ကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဝါဒဖြန့်ရဲတဲ့ DVB တို့ရဲ့ရပ်တည်မှု ပိုင်းတွေကို မေးခွန်းထုတ်သင့်နေပြီလို့ မထင်ကြဘူးလား။ ပြည်သူတွေကိုေ-ာက်ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့ အချိုး လုပ်ပြနေတာလား။
ဦး စစ်မင်း သူတို့ အားလုံး ၀ိုင်းတင် ထားတဲ့ မင်းသားကြီးကို -ပြည်သူတွေ ကလဲ မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ ..ဇာတ်ပွဲကြေးတွေကလဲ ယူထားပြီးပြီ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့ :S
Ko A Arakan အသက်ပေးကားကွယ်မည်မပြောနှင့် ဒေါ်လာပေးသည်နှင့် နိုင်ငံကိုရောင်းစားကြသည်။သစ်လွင် မျိုးဆက် သတိရှိကြ သမိုင်းကို လိမ်နေတဲ့လူတွေ ဘဘဦးတင်ဦးကို ရန်မူဖို့ အမေစုနဲ့ လှည့်တိုက်နေပြီ။ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းလိုင်းကို ဆွဲခေါ်နေပြီ။ နိုင်ငံတကာမှာ သနားစရာ မျက်နှာတွေ လုပ်နေတော့ ကိုယ်ကမှားတာနဲ့ လူမျိုးကြီးက လူမျိုးလေးကိုဖိတယ်လို့ ပုလင်းတူဘူးဆို့တွေက သတ်မှတ်ကြလိမ့်မယ်။အမှန်ပျောက်လိမ့်မယ်။ တို့တစ်တွေ နယ်ချဲ့တွေကို တိုက်နေကြတာ။
ကို ကို lier lier lier lier lier lier lier lier lier lier lier lier lier lier lier lier lier lier lier lier lier lier lier lier lier lier lier lier lier lier lier lier lier lier lier
Thuya Aung : ဝါရင့်တွေလည်း $ ကြိုက်တယ်လေ...Lol
Arakan Dennis ပိုရင့်လေပိုကြိုကလေ။ကြားလားတော့မသိဘူး ကြားလဲဂရုမစိုက်ဘူးဗျာ
Loveboy Lay ဒေါ်လာဒေါ်လာ ဖျက်မရ BBC ကလုပ်ကြံရ၊ မဟုတ်လှတဲ့ သတင်းရယ် များစွာရေးပါတယ်။ သတင်းမှန်များ ဖျက်ခါပြော BBCက ဒေါ်လာပေါ။ BBCမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်အား လွန်စွာမှUNLike
ဦး စစ်မင်း DVB VOA RFA mizzima ပြည်ပ သတင်းဌာန တော်တော်များများဟာ ဘာကြောင့် အသံ မထွက်လဲ ဆိုတော့... "ရိုဟင်ဂျာ" ဆိုတာ သူတို့ အားလုံး ၀ိုင်းပီး ပွဲထုတ်ထားတဲ့ မင်းသားကြီးပဲလေ..။ BBC က သာ အခု လိုmap တွေချိန်းတင် တော့ အမြင်ပိုးဆိုးသွားပြီး အားလုံး ပစ်မှတ် က BBC ဖြစ်နေတာ လို့ ကျွန်တော် ထင်တယ်..။။တကယ်တော့ ပြည်ပ မီဒီယာ အားလုံးက ပုလင်းတူဗူးဆို့တွေပါပဲလို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်..။
Melven Than မတောင်းပန်တဲ့ .မဖြေရှင်းရဲတဲ့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ ကြိုက်တာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘော၊ မီးမွှေးပေးတဲ့သဘောပဲ။ အမှားကိုဝန်ခံပြီး ဓာတ်ပုံလဲပေးတယ်၊ ဆက်မှာနေတဲ့ ကုလားပုံကို မဖြုတ်ပေးဘူး။ ဒါမြန်မာပြည်ကို သက်သက်မဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ရှို့မီးလုပ်တာပဲ။ ဒီပြဿနာ ဘယ်လောက်ကြီးမလဲဆိုတာ မင်းတို့ သိသင့်တယ်။ ငွေမျက်နှာကြောင့် တိုင်းပြည်ကိုမရောင်းစားနဲ့။
Par Par Gyi : BBC Burmese သတင်းဌာနမှ- မဟုတ်မမှန်သော သတင်းတရပ်အား လွှင့်တင်ရာမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကုလား-ဗမာ အရေးခင်းဖြစ်ရန် အခြေအနေတရပ် အချိန်မရွေးဖြစ်ပွားဖွယ်ရှိကြောင်း ခိုင်လှုံသော သတင်းရပ်ကွပ်မှ ကြားရသည်။
Too Toelay ဖြစ်လာရင်တော့ ဘယ်သူ့ မှလက်ညိုးမထိုးနဲ့ အားလုံး BBC တာဝန်
ခိုင် မင်း ညို ဘီဘီစီ ဟာ ရိုးဖြောင့်စွာနဲ့ သူ့အမှားကိုသူ ၀န်ချတောင်းပန်ဖို့ အလားအလာမတွေ့ရဘူး။ ဒီ့အတွက်ဒီကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်လို့ ဘီဘီစီကို ဆန္ဒပြ သပိတ်မှောက်ဖို့ သဘောတူကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအနေနဲ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ ခုထဲက စ လုပ်ထားဖို့ နှိုးဆောင်ပါရစေ။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရက်ပြည့်တာနဲ့ ကျနော်တို့ စ ပါ့မယ်။
ခိုင် မင်း ညို အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဘီဘီစီ (မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်) အား နိရဉ္စရာမှ ဖုံးမှ တဆင့် မေးမြန်းရာ ဘီဘီစီ ၀ိုင်းတော်သား တစ်ဦးက ယခုလို ပြန်လည် ဖြေကြားသည်။
Tay Zar Cm BBC ရေ..ရိုဟင်ဂျာ ကုလားတွေကို မြန်မာနိုင်ငံဖွား တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအဖြစ်မြင်ချင်ရင်တော့ မင်းတို့နေတဲ့ အိမ်မှာဘဲ မင်းတို့ ပထွေးတွေကိုပေးနေလိုက်ပါ...မင်းတို့ကဘာအဆင့်မှမရှိဘဲ ကျွေးတာစား ခိုင်းတာလုပ်ပီး ပိုက်ဆံရနေတာသိပေမယ့် လူလိုနားလည်တတ်ရင်တော့ အမှားပြင်ပီး ပြန်တောင်းပန်ပေးပါ....
Tun Aung Kyaw ဘီဘီစီအနေနဲ့ ခုလို ပြင်ဆင်ပေးလိုက်တာကောင်းပါတယ်--ဒါပေမယ့် ရှင်းလင်းချက်ကတော့ လုံးဝ အဓိပ္ပါယ်မရှိပါဘူး--ဘီဘီစီ လို သတင်းဌါနကြီးတစ်ခုက အရေးပါတဲ့ သတင်းထောက်တစ်ယောက် အနေနဲ့ ခြေခြေမြစ်မြစ်မသိတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို ခုလို ဆရာကြီးဝင်လုပ်လိုက်တော့ဘီဘီစီရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဟာ မြန်မာတွေအကြားမှာ အဖတ်ဆည်မရ ဖြစ်သွားတာပါဘဲ
Min Ko Aung ဘီဘီစီ ၀ိုင်းတော်သားများ အားလုံးအတွက် ဒေါက်တာသန်းထွန်း ၏ စကားတခွန်းအား လက်ဆောင် ပါးလိုက်ပါသည်။ "သမိုင်းအား မအ အောင် သင်ခြင်း ဖြစ်သည် " သင်တို့ ကိုးကွယ်နေသော မန္တလေး မဟာမြတ်မုနိ ဇလွန်ပြည်တော်ပြန် ရန်အောင်မြင်မုနိ ပြည်မှေ၇ွှဘုံသာမုနိ ကျောက်တော်မှ မဟာမြတ်မုနိ ဤ့ မုနိငါးဆူ သည် မဟာသက္ကရာဇ် ၁၂၃ ခုနှစ်တွင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားေ၇ှ့ မှောက် ၌ ရတနာ ၉ ပါးနှင့် သွန်းလုပ်ထားသော နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော်ပြီ ဖြစ်သည့်မြန်မာပြည်မှေ၇ှးအကျဆုံး ၀ါတော်အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓ္ပဆင်းတုတော်များ ဖြစ်သည်။ မူဆလင်ဘာသာကို တည်ထောင်သော တမန်တော်မိုဟာမက်ပေါ်သည် မှာ နှစ်ပေါင်း ၁၄၀၀ ပဲ ၇ှိသေးသည်။ ဘီဘီစီ ၀ိုင်းတော်သားများ အနေဖြင့်ဤ့ ဘု၇ားများအား ကိုကွယ်မည့် အစား ပေါင်ငွေ နှင့် ဒေါ်လာများအား ကိုးကွယ်သင့် ပါသည်။
သီဟ သူရ မင်းမင်းထက် လုံးဝ ကန့်ကွက်တယ်... ပက်ပက်စက်စက်ကန့် ကွက်တယ် BBC ဒါဒုတိယအကြိမ်ပြောခြင်းဖြစ်တယ်...မင်းတို့ တွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ၀န်ခံပါ...တောင်းပန်ပါ...ဒီကိစ္စမဖြေရှင်းသေးသမျှ ဆက်ပြောနေအုံးမှာပဲ..အဲဒါ သဘောပေါက်ထားကြ
Tu Tu Chay ဘီဘီစီကကောင်တွေ လေဖြတ်သွားကြပြီလား အမြန်တောင်းပန်
Thazin Mon ဘီဘီစီရေ.. ရှက်တတ်ရင် လဲသေဖို့ တော့ ကောင်းပြီနော်...
Khaing Minko BBC ၀ိုင်းတော်သားတွေ လေပန်းလာတာ ဘယ်နှနှစ်ကြာပြီလဲ ပန်းနေတဲ့လေက, ဘယ်မှာအကျိုးရှိလို့လဲ မြန်မာပြည်ကို BBC ကိုဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်လို့လဲ, လဲ BBC၀ိုင်းတော်သားတွေ မြန်ပြည်သူတွေမပေါ်မှာ သွေးမကွဲစေချင်တဲ့စိတ်ဓါတ်, ရှိကြရင် ဒီတောကလားတွေရဲ့ပြဿနာကို အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးပါ စားပြီးနားမလည်, မလုပ်ကြပါနဲ့။
Mi Nyo Nyo အရှက်မရှိသော ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း ၀ိုင်းတော်သားများ နှုတ်ပိတ်နေကြသည်။
Ye Min သမိုင်းအမှားတွေ၊ ဓါတ်ပုံအမှားတွေတင်ထားပြီး လူမျိုးရေးကို စော်ကားတာ အသည်း တစ်စက်စက် နာတယ် "...
Khaing Minko စစ်ပွဲကို သေနတ်နဲ့တိုက်ပါ ကလောင်ကို ကလောင်နဲ့တိုက်ပါ မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ့တိုက်ပါ BBC မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတိုင်တိုက်ကြပါ။
သံလွင် ရရစ် ဘီဘီစီနဲ့ပေါင်းပြီးအမေစုကိုပါလိုက်ဒုက္ခပေးနေဘီ ဘီဘီစီ မြန်မာပြည်ကောင်းရင်သူတို့စားခွက်ပျောက်မှာသိပ်ကြောက်ပါသည် http://www.facebook.com/note.php?note_id=260664180646877
Tu Tu Chay တစ်ကမ္ဘာလုံးက မြန်မာလူမျိုးတွေ BBC ကိုသပိတ်မှောက်ကြ
Tun Aung Kyaw အားလုံးကတောင်းဆိုနေကြတယ်--ဒီတောင်းဆိုမှုတွေက ရပ်သွားမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီကိစ္စ ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်း အနေနဲ့ တိုက်ရိုက်တာဝန်မရှိရင်တောင်မှ ငါတို့နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး ဆိုပြီး ဆိတ်ဆိတ်မနေသင့်ပါဘူး-- ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တစ်ခုခု ဖြေရှင်းချက်ထုတ်ပေးစေချင်ပါတယ်-ဘီဘိစီ မြန်မာပိုင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုထားတယ်ဆိုတာ သတိထားသင့်ပါတယ်--
Olly Thxa Get Out BBC (Burmese)
Aungzaw Aungzaw Myint bbc အမှားအတွက် မြန်မာလူထုကို တောင်းပန်ပါ။ ကျုပ်လဲ ခင်ဗျာတို့ ကို လုံး ၀ မကျေနပ်ဘူး။ သမိုင်း ကို ဖျက် တာဟာ အကြီးမားဆုံး ရန်သူပဲ။
Nainai Tun ရိုဟင်ဂျာအလိုမရှိ၊ ပြည်ဖျက်သစ္စဖောက် ဟန်ညောင်ဝေအလိုမရှိ၊ No
ကြယ် စင် လင်း မြန်မာ မျိူးချစ် ဟက်ကာ အပေါင်းတို့ ဘီဘီစီ ဆိုက်တွေအားလုံး ၀ိုင်း သမကြလော့... ကျောင်းမှန်းကန်မှန်သိအောင်... ဆုံးမကြလော့..... အသားထဲက လောက်တွေကို..ရေနွေးစိမ် .ကြလော့..... မြန်မာ့သွေး ရဲကြောင်း ပြကြလော့..
Tu Tu Chay ဘီဘီစီ လိမ်နေသည် ဘီဘီစီ ညာနေသည် ဘီဘီစီတိုင်းပြည်ရောင်းစားနေသည် ဘီဘီစီ ဒေါ်လာဝါးနေသည် ဘီဘီစီ ညာတာပါတေးလုပ်နေသည် ဘီဘီစီ တိုင်းပြည်ဖျက်နေသည် အကောက်ကြံခလောက်ဆန် လေလှိုင်းသံလူသတ်သမား မုဒိန်းသမား သခိုး ဒမြ ခါးပိုက်နိုက် ထမိန်သခိုး ဘိန်းစား တွေအသံနားမယောင်လေနဲ့သတိထား အသံလွင့်ရင်မြန်မာသံနဲ့မလွင့်နဲ့ကုလားလိုပဲလွင့် ကြားလားမသာတွေ
Kaung Mrat Thu လုပ်ရက်ကြပါပေ....ရှက်တတ်ရင်လဲ သေဖို့ကောင်းဒယ်....bbc ရယ်...
Myo Morn Tun မြန်မာနိူင်ငံတွင်အစိုးရအဆက်ဆက်မည်သို့ပင်ပြောင်းလဲပါစေ၊ နိူင်ငံအားရောင်းမစားခဲ့ကြ။ နိူင်ငံအားရောင်းစား သစ္စာဖောက်ခြင်းသည် အကြီးလေးဆုံးပြစ်မှုဖြစ်သည်။ လက်တစ်ဆုပ်စာ ဘီဘီစီမြန်မာဝိုင်းတော်သား သစ္စာဖောက်များ အမြင်မှန်ပြီး အမှန်မြင်စေချင်ပါသည်။
Myo Morn Tun မြန်မာနိူင်ငံမြေပုံသည် မြန်မာနိူင်ငံတွင်နေထိုင်သော တိုင်းရင်းသားလူထုများနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ဘီဘီစီဆောင်းပါးရှင်မပြောနှင့် မည်သည့်သတင်းဌာနမှဆောင်းပါးရှင်မှ မြန်မာနိူင်ငံမြေပုံကို ထင်သလိုလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိ… အရှက်မရှိသော ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း ၀ိုင်းတော်သားများ နှုတ်ပိတ်နေကြသည်။
Myo Morn Tun ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလူထုသည် ဘီဘီစီသတင်းဌာနအား လူအခွင့်အရေး အကြောင်းအရာအားပြောနေသည်မဟုတ်၊ Kick it out အကြောင်းအားလည်းဆန့်ကျင်နေသည်မဟုတ်။နိူင်ငံနှင့်လူမျိုးအပေါ်စော်ကားထားသော ဘီဘီစီဆောင်းပါးရှင်နှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်းပါးရှင်နှင့် ဘီဘီစီသတင်းဌာနမှ အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းတောင်းပန်ပေးရန် ထပ်မံတောင်းဆိုအပ်ပါသည်။
Tu Tu Chay ဟုတ်ပ ဟုတ်ပ ဘီဘီစီ လိမ်နေသည် ဘီဘီစီ ညာနေသည် ဘီဘီစီတိုင်းပြည်ရောင်းစားနေသည် ဘီဘီစီ ဒေါ်လာဝါးနေသည် ဘီဘီစီ ညာတာပါတေးလုပ်နေသည် ဘီဘီစီ တိုင်းပြည်ဖျက်နေသည် ဘီဘီစီ အကျော်အခွလုပ်နေသည် ဘီဘီစီ ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေသည် ဘီဘီစီ မကောင်းတာအကုန်လုပ်နေသည် အကောက်ကြံခလောက်ဆန် လေလှိုင်းသံလူသတ်သမား မုဒိန်းသမား သခိုး ဒမြ ခါးပိုက်နိုက် ထမိန်သခိုး ဘိန်းစား တွေအသံနားမယောင်လေနဲ့သတိထား အသံလွင့်ရင်မြန်မာသံနဲ့မလွင့်နဲ့ကုလားလိုပဲလွင့် ကြားလားမသာတွေ
Myo Morn Tun နိရဉ္စရာသတင်းဌာနမှ ဘီဘီစီဝိုင်းတော်သားတစ်ဦးအားမေးမြန်းချက်အား ယခုလိုဖော်ပြထားပါသည်။ " ကျွန်တော်တို့နဲ့ မသက်ဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ ဒီဥစ္စာက ဒီသူတို့ Asia-Pacific ဌာနက တင်ထားတဲ့ ဥစ္စာပါ။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘီဘီစီ Asia-Pacific ဌာကို ဆက်သွယ်ရင် ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျာ"ဟု ပြောသည်။ဟုလည်းကောင်း ဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါသည်။
Myo Morn Tun ‎" အဲဒါကလေ ကျွန်တော်တို့ ဘီဘီစီ Facebook မှာလည်း ရေးထားပြီးပါပြီခင်ဗျာ။ ဒီကိစ္စက ကျွန် တော်တို့ ဒီလို သီးခြားဖြေရှင်းလို့ မရပါဘူး ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ ဘီဘီစီ Facebook မှာ အထက် အရာရှိတွေရဲ့ ဖြေရှင်းချက်ကို ရေးထားပြီးပါပြီ ခင်ဗျာ။" ဟုလည်း မေးမြန်းချက်ကိုဖြေကြားထားပါသည်။ ဘီဘီစီ ၀ိုင်းတော်သား ပြောသလို ၄င်းအထက်လူကြီးဆိုသည့် သူများနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လို့ရမည့် လိပ်စာများကိုဖော်ပြပေးစေလိုပါသည်။
Thwaythit Sar ပါသေးပါတယ်... ဘာဒဲ့
အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဘီဘီစီ (မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်) အား နိရဉ္စရာမှ ဖုံးမှ တဆင့် မေးမြန်းရာ ဘီဘီစီ
၀ိုင်းတော်သား တစ်ဦးက ယခုလို ပြန်လည် ဖြေကြားသည်။
" အဲဒါကလေ ကျွန်တော်တို့ ဘီဘီစီ Facebook မှာလည်း ရေးထားပြီးပါပြီခင်ဗျာ။ ဒီကိစ္စက ကျွန် တော်တို့ ဒီလို သီးခြားဖြေရှင်းလို့ မရပါဘူး ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ ဘီဘီစီ Facebook မှာ အထက် အရာရှိတွေရဲ့ ဖြေရှင်းချက်ကို ရေးထားပြီးပါပြီ ခင်ဗျာ။"
အမိန့် နာမည်ခံတတ်မှု အပိုင်းကတော့ တော်တော် ကောင်းတယ်လို့ ပြောလို့ ရတယ်... သူ့တို့ အထက်က ပထွေး တွေ ရှင်းပြသလောက်ပဲ ရှင်းတယ်... မြန်မာ အချင်းချင်း တောင်းပန်ပါတယ်... ကျွန်တော်၊ကျွန်မတို့ မှာ ဘယ်လို ဖြစ်လို့ပါ.. ဘာညာ သဖြင့်တော့ မရှိဘူး... :(
Myo Morn Tun လူထု၏ကန့်ကွက်မှုကိုအဲဒီစာလေးတစ်စောင်ပြန်လိုက်တာနဲ့ ဖြေရှင်းတောင်းပန်ရာရောက်သလား... ပြီးတော့ အဲဒီစာမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကကော ခင်ဗျားတို့ ဘီဘီစီရဲ့ အာဘော်တွေကိုပဲ ကြေငြာတာမဟုတ်လား... မှားရင်မှားကြောင်း သိက်ခါရှိရှိ ၀န်ခံရဲရတယ်ဗျ...၏
Linn Maung Maung မြန်မာ့သမိုင်းကို အမှားဖြစ်အောင် မလုပ်ပါနဲ့တော့ဗျာ။ Asia-Pacific ကလူတွေကိုလဲပြောပြလိုက်ပါ။ မြန်မာတိုင်းရင်းသားလူမျိုး ဘယ်နှမျိုးရှိသလဲဆိုတာ မသိပဲနဲ့ မြေပုံတွေဘာတွေနဲ့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လုပ်မနေပါနဲ့လို့။ ဒီမြေပုံကို လုံးဝအသိအမှတ်မပြုပါဘူး။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားပဲရှိပါတယ်။
Thwaythit Sar Asia-Pacific ဆိုတာ ဘီဘီစီဌာနခွဲပဲ.. အတူတူပဲ.. မြန်မာနိုင်ငံ အရေးကို ရေးမယ်ဆိုရင် ဘီဘီစီ မြန်မာတွေ ကို တိုင်ပင်မယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်.. မတိုင်ပင်ပဲ ရေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး.. နောက်ပြီး ဘီဘီစီ မြန်မာ ပိုင်းက မြန်မာတွေက အစကတည်းက ပြေလည်စေချင်ရင်... ကျွန်တော်၊ကျွန်မ မေးပေးပါ့မယ်... သတင်းမှားခဲ့ရင်လဲ အနူးညွှတ် တောင်းပန်ပါတယ်.. စသဖြင့်တော့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြောဆိုပြီး ဖြေရှင်းသင့်တယ်လေ... အခုဟာက.. သူတို့က မတူသလို မတန်သလို မဖြေရှင်ချင်သလို... ငါတို့ကပဲ အဖျက်သမားတွေလိုလိုနဲ့... :(
ညီ ဖြိုး မြန်မာ့သမိုင်းးစကထဲက BBC က မဟုတ်တာတွေ လိမ်လည်လာတာ ခုထိမရပ်သေးဘူးလား ကွ ရှက်တက်ရင် ရှက်သင့်ပါတယ် BBC ရာ
Thet Zaw Naing အမျိုးသားရေး၊ လူမျိုးရေးဖြစ်နေတဲ့အတွက် BBC အနေနဲ့ဘင်္ဂါလီ သတင်းကို သေသေချာချာ ပြန်လည် ရှင်းလင်း ပေးပါ ။
သံလွင် ရရစ် ဘီဘီစီ ဝင်ရှုပ်ချင်သေးလား
သံလွင် ရရစ် ဘီဘီစီ ခင်ဗျားတို့သတင်းတွေထပ်မတင်ပါနဲ့တော့ ကျုပ်တို့မယုံတော့ဘူး ခင်ဗျားတို့က ပြည်တွင်းမှာအဆင်ပြေနေတာကိုမကြည့်ချင်ကြဘူးထင်တယ် အဆင်ပြေခါနီးလိုက် ခဗျားတို့ကြောင့်ပိုဝေးသွားလိုက်နဲ့ ဒီတခါငြိမ်ငြိမ်လေးနေပေးကြပါ အခြေအနေကိုမဖျက်စီးပါနှင့် အမေစုနဲ့အစိုးရကြားသွေးမခွဲပါနဲ့
Negative Thunder ကုလား ကိစ္စက ဒီကောင်သက်သက်မီးမွှေးတာပဲ ငါ...ိုးမ BBC
Khaing Linn ဘီဘီစီက လခအပြင် အောက်ဆိုဒ်ပိုက်ဆံရတော့ တိုင်းပြည်ကို ရောင်းစားသပကွယ်ရို့။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသာ သက်ရှိထင်ရှားရှိရင် ခင်ဗျားတို့ စောက်ခွက်ကို ဖြတ်ရိုက်ပစ်မလားမသိ ။ ဦးသန်းရွှေတို့။ ဗိုလ်နေ၀င်းတို့ ထက် မိုက်သကော ။ သမိုင်းမှာတော့ အဲဒီကာကလ တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ လူတွေ သွားပေရော့ပေါ့အမှိုက်တောင်းထဲမှာ ။
Min Ko Aung ဘီဘီစီ ၀ိုင်းတော်သားများ အားလုံးအတွက် ဒေါက်တာသန်းထွန်း ၏ စကားတခွန်းအား လက်ဆောင် ပါးလိုက်ပါသည်။ "သမိုင်းအား မအ အောင် သင်ခြင်း ဖြစ်သည် "သင်တို့ ကိုးကွယ်နေသော မန္တလေး မဟာမြတ်မုနိ ဇလွန်ပြည်တော်ပြန် ရန်အောင်မြင်မုနိ ပြည်မှေ၇ွှဘုံသာမုနိ ကျောက်တော်မှ မဟာမြတ်မုနိ ဤ့ မုနိငါးဆူ သည် မဟာသက္ကရာဇ် ၁၂၃ ခုနှစ်တွင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားေ၇ှ့ မှောက် ၌ ရတနာ ၉ ပါးနှင့် သွန်းလုပ်ထားသော နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော်ပြီ ဖြစ်သည့်မြန်မာပြည်မှေ၇ှးအကျဆုံး ၀ါတော်အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓ္ပဆင်းတုတော်များ ဖြစ်သည်။ မူဆလင်ဘာသာကို တည်ထောင်သော တမန်တော်မိုဟာမက်ပေါ်သည် မှာ နှစ်ပေါင်း ၁၄၀၀ ပဲ ၇ှိသေးသည်။ ဘီဘီစီ ၀ိုင်းတော်သားများ အနေဖြင့်ဤ့ ဘု၇ားများအား ကိုကွယ်မည့် အစား ပေါင်ငွေ နှင့် ဒေါ်လာများအား ကိုးကွယ်သင့် ပါသည်။
Kyawlin Myat မြန်မာပြည်သူတွေကို ဂရုမစိုက်ဘူး ဆိုတဲ့ သဘော ထင်တယ် ဘီဘီစီ... ကလူတွေစာဖတ်တတ်ပြီး နားလည်မူရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ဘာလုပ်သင့်သလဲ စဉ်းစားစေချင်တယ်
Kyaw Swar OoးBBC မြန်မာပိုင်း ကကောင်တွေ ကောင်မတွေ...အခုချက်ချင်း မြန်မာပြည်သူတွေကို တောင်းပန်စမ်း.....
Seiko Su ကမ္ဘာ့အကြီးအကဲတွေ ကမ္ဘာကျော်တွေ နောက် နိုင်ငံတကာက ခေါင်းဆောင်တွေ ခဏခဏတော့ပြောကြပါလိမ့်မယ် ဘီဘီစီမသိရင် ပြောပြမယ် မှတ်ထား ကမ္ဘာပေါ်မှာက လွတ်လပ်ခွင့်အတွက် အသက်တွေကို စတေးနေကြတာက အခြေခံအ ကြောင်းရင်းတစ်ခု မဟုတ်ဘူး အယူဝါဒတစ်ခု လွှမ်းမိုးဖို့အသေခံပြီး ဘ၀တွေကို စတေးနေကြတာ...................
Kyaw Swar Oo : စောက်ရှက်မရှိတဲ့BBC မင်းတို့စားစရာမရှိတော့ လို့ပိုက်ဆံရပြီးရောတင်နေတာလား... အရင်က အထင်ကြီးပြီး အဟုတ်မှတ်ခဲ့ တာတွေအတွက်...အချိန်တွေကုန်သွားတယ်...အလကား မိုးလုံးပြည့် မုသာဝါဒတွေ........မင်းတို့ က အဲဒီရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာတွေရဲ့ ..အမျိုးတွေလား.....
Htet Aung ဘီဘီစီ မောင်/မယ် များ..။မကြိုက်ကြောင်း တယ်ယင်းတို့ wall ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ post တွေကို မဖြုတ်ကြေးနော်။ကြိုက်ကြောင်း ထောက်ခံကြောင်းတင်ထားတဲ့ post တွေကို လည်း မဖြုတ်ခဲ့သလိုပေါ့..။(ဒီ post ကို သူတို့ (ဘီဘီစီ) wall ပေါ်သွားတင်တာ ၂ ခါရှိပြီ အဖြုတ်ခံရတာ.။ရှက်တက်တယ် ထင်တယ်ဗျ။)
Nyi Win Åung : *_မင်းသားခေါင်းစွပ်ထားသော ဘီလူးသည်ဘယ်လောက်ပင်ဟန်ဆောင်ကောင်းပါစေတစ်နေ့နေ့တစ်ချိန်2မှာအစွယ်ထွက်လာမြဲ...အခုလည်းတစ်ချိန်ကပြည်သူများရဲ့အားကိုးဖွယ်ရာဟန်ဆောင်ခဲသော BBC သည်သူအစွယ်ထွက်လာချိန်.. တကယ့်ကိုစက်ဆုပ်ဖွယ်ရာကောင်းလှပါတကား_* :(
Hein Ko Ko Aung အရင် တုန်း က အစိုးရသတင်းစာ တွေမှာ BBC လိမ် နေသည်..လို့ ရေးထားတော့စစ်အစိုးရ က တဖတ်သတ် အမြင်နဲ့ မလိုလို့ ရေးထားတာပါ လားလို့ ထင် ပြီး ...BBC သတင်း တွေကို အချိန်ပေး ပြီး နားထောင်လာခဲ့ တာ ...facebook မှာ BBC page တင်တော့ လဲ like လုပ် ပြီး ဖတ် လိုက်၇တာ..အခုတော့ ....(BBC က ကအမှန် တကယ်ကို့ လိမ်နေပါသည်..)ကို ကိုယ်တိုင် ကြုံမှ သိလိုက်၇တဲ့ အတွက် တော်တော် လေးကို နောင်တရရှက် မီပါသည်
Soe Minlwin ဒီလိုအဆင့်မရှိတဲ့အတွေးတွေနဲ့ အလွန်လှတဲ့ မြန်မာပြည်မြေပုံကို ခွေးတံဆိပ်လာမတပ်ပါနဲ့။မင်းတို့ရဲ့ အဖေတွေအတွက် ငါတို့ရဲ့ လှပတဲ့သမိုင်းကိုမပြောင်းနိုင်ပါ။
ဆန်း သစ် ဟန်ညောင်ဝေနဲ့ဘီဘီစီကအမျိုးသားသစ္စာဖောက်တွေ မင့်တို့ဆွဲသွင်းတဲ့ချေးကုလားမင်းတို့ပဲဆွဲ ထုတ်သွားကြပါ။
Fwd: ဒုတိယသမ္မတ သီဟသူရဦးတင်အောင်မြင့်ဦးနှင့် တရုတ်ဝ...
ရိုဟင်ဂျာသည် မြန်မာတိုင်းရင်းသား ညီကိုဖြစ်သည် ၊ သေ...
ဘင်္ဂလီတွေရဲ့ နောက်ဆုံးပန်းတိုင် ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ...
၊ ရိုဟင်ဂျာအရေး...မြန်မာတွေ ပေးတဲ့ ခပ်စပ်စပ် ကောမန...
BBC မီဒီယာရဲ့အမှားတွေတင်ပြတာကို ထုတ်ဖော်ပါ။ ကန့်...
GSM တယ်လီဖုန်း လေးသန်းအား ၂၀၁၂ ဇန်န၀ါရီတွင် ဖြန့်ခ...
အမွေးအမှင်များရိတ်နည်း (ယောက်ျားလေးများအတွက်သာ) ၊ ...
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦး ဆံပင်ဆေးဆိုးပြီး ...
ခွေးရူးပြန်ရောဂါ အဖြစ် အများဆုံးနိုင်ငံတွင် မြန်မာ...
တရုတ်နိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓစွယ်တော်မြတ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ...
ရေလွှမ်းမိုးမှုပြဿနာ အကျပ်အတည်းကို ယင်းလတ်အစိုးရ ကို...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပြည်သူများမှ ရွေးချယ်ပေးသည့်...
မြန်မာသံရုံးမရှိသော နိုင်ငံမှ နိုင်ငံသားများမှ လွဲ...
နယူးယော့ခ်မြို့တွင် ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျမှု ဖြစ်ပွား ၊ ထိ...
ဆင်ခြေဖုံး မြို့နယ် များတွင် ကလေးသူငယ် ပျောက်ဆုံး...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှုများကို ကြိုဆိုေ...
မြစ်ဆုံအတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း (Petition for Irr...
သီတင်းကျွတ်လပြည့် အဘိဓမ္မအခါတော်နေ့ ၊ သီတင်းကျွတ်ပြ...
သတိ! စာဖတ်ရန် မမေ့ပါနှင့်
အနောက်နိုင်ငံ ကျောင်းသားဗီဇာ ယခင်ထက် မြန်ဆန်စွာရနေ...
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းထားမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်င...